စောင်းဖဲချပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးသက်သာဖဲခန္းမ်ားအားကစားတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် နှင့်စည်းကမ်းချက်များ၌အသွားအလာ၏၊ထိုသို့ဖြစ်ဒုတိယသာ ။ အတိုချုပ်ပြောရရင်၊အပြည့်အဝတိမျးစောသည်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုနှစ်ဦးစလုံးသည်ပုံမှန်ကစားသမားတွေနှင့်အသစ်ကစားသမားတွေအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့အရည်အသွေးဖဲချပ်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အစည်းအဝေးဖဲကစားသမား၊ထိုအခါအပြည့်အဝတိမျးစောချက်အကိုက်:ပျော့ပျောင်းယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုသူဖော်ရွေဆော့ဖ်ဝဲကိုဖို့ခွင့်ပြုသောဤအွန်လိုင်းဖဲချပ်။ ပြီးပြည့်စုံသောအကြောင်း-။ သာဖဲခန်းအကြောင်းအပြည့်အဝအရွက်မျးနောက်ကွယ်မှ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကစားသမားအသွားအလာနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအ ။ အဖြစ်ထားပြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့၊အသာဖဲအခန်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးကစားသမားအသွားအလာ ၊သို့သော်ဤခြားနားချက်ကယ့်ကိုမရေးဖြစ်၊အားလုံးလူကြိုက်များတို့ဝတ်မွတ္ထားပြဲကန့်သတ်နှင့်အများအပြားမြင့်မြင့်ကန့်သတ်ရှိသည်လိမ့်မည်မျှမျှတတညင်သာယှဉ်ပြိုင်မှုစောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်ရသောအမြတ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ $၂၀၀ အသားနှင့်$၄၀၀ တို့ကန့်သတ်အများအားဖြင့်အလေးအနက်ကစားသမားအားဖြင့်ကစား၊ဆိုလိုသောစားပွဲပေါ်မှာရွေးချယ်ခြင်းသည်အရေးပါသည့်အချက်တစ်ချက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပိုက်ဆံအနိုင်ရပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာ။ အပြည့်အဝတိမျးစောဖဲဆော့ဖ်ဝဲကိုအမြဲလူသိများခဲ့ပြီး၎င်း၏အစာရှောင်ကုန်တင်နှင့်လွယ်ကူသော-ကို-လမ်းညွှန်မွတ္ထား၊ဒါကြောင့်သံသယလိမ့်မယ်အစဉ်ရှိပါကမည်သည့်ဒုက္ခဂိမ်းကစားခြင်း။ အဆိုပါဧည့်တုံ့ပြန်မှုအလွန်လျင်မြန်စွာအားလုံးတောင်းဆိုမှုများ၊ပေးခြင်းနှင့်စစ္ျကျောက်ပြားဖို့အကောင်းဆုံးစားပွဲသင်တို့အဘို့အလွန်လွယ်ကူသည်။ ပြောသွားတာကထားရန် အကြောင်းအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်၏အပြည့်အဝတိမျးစောဖဲ၊ဒါဟာတကယ်ကိုအရမ်းခက်ခဲရှာတွေ့မှမည်သည့်အားနည်းချက်များအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲပင်လျှင်သင်ပြုဖို့ကြိုးစား။ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်မှာကျောက်ပြားကိုထင်ရစေခြင်းငှါလည်းကာတွန်းတချို့ကစားသမားတွေအတွက်၊ဒါပေမဲ့ဒီအရာပေးသည်သောအရာကိုအပြည့်အဝတိမျးစောဖဲ၎င်းထောက်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်အလိုရှိနေတဲ့ပိုပြီးအလေးအနက်ဒီဇိုင်း၊သို့သော်အဆုံးမှာအစည်းအဝေးသင်ခဲလှ၏အကြောင်းစဉ်းစား၊ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်စကားမှအကောင်းအနိုင်ရရှိနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးနူးညံ့သောလယ်ပြင်၌၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအပြစ်အကြောင်းတိုင်ကြား။ ဆုကြေးငွေအပေါ်အပြည့်အဝတိမျးစောဖဲချပ်သည်ပျမ်းမျှထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်နှင့်လွယ်ကူအရအတွက်ထက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးဖဲခန္း-၁၀၀ ပွင့်ဖို့$၆၀၀။ ဒီအဆုကြေးငွေများအတွက်ရရှိနိုင်အားလုံးကိုအဘယ်သူသည်နယူးကစားသမားတွေရှိသည်အဘို့ဖွင့်လက်မှတ်ရေးထိုး ဖဲချပ်။ ခြုံငုံ၊ဤတစ်အပိုဆုအလွန်ဆွဲဆောင်မှု။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အနည်းငယ်ဆုကြေးငွေရကျိုးနပ်သည်၊သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းအပေါ်၊ဒါကြောင့်သင်စေပါလိမ့်မယ်အသိသာထင်ရှားသောအလှူ၏အ နိုင်လျှင်သင်အထွက်အများဆုံးရရန်ဤအပိုဆု။ လောင်းကစားဇုန္၊ အတွက်၊ကြောင်းကြေညာသာ ၂၀၂၁ မည်ရှင်သာ ရုရှားနိုင်ငံ
–ဤကားဆင်းရဲဖက်သာရှိသောကတ်များတူညီတဲ့ရာထူး။ နောက်အမြင့်ဆုံးပေါင်းစပ်ပြီးနောက်မောင်နှံနှစ်ဦး။ ကတည်းကအပြည့်အဝပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါသည်ငါးကတ်များအတွက်အပြင်အရံသုံးခုရှိပါတယ်အခြားအကြောင်းကတ်များကိုမတက်အောင်ဆို။ ဤသုံးပါးကတ်ဟုခေါ်ကြသည်အရ ။ လျှင်နှစ်ယောက်တူတူထား၊အတူတူတွဲ၊အဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားဘယ်သူဩပိုမိုမြင့်မားသည်။ လျှင်နှစ်ခုကစားသမား၏တူညီသောရာထူးများအမြင့်မားဆုံးရှိ ၊ထိုအခါဒုတိယအမြင့်ဆုံး နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ပါကဒုတိယအ ၏တူညီသောအဆင့်၊ထို့နောက်တတိယပါ။ ရှိပါတယ်လျှင်အဘယ်မှာရှိအနေအထားနှစ်ခုကစားသမားကောက်ယူပါပြီအတူတူအားလုံးနှင့်အားလုံးအတူတူ ၊ပြီးတော့သူတို့ကစားအိုးများထဲတွင်။ ဒါဟာအများဆုံးလူသိများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးဆရာများမှာတက်ကြွကစားသမားတွေနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံသောသူကိုရှင်းပြအတွက်ဖတ်ရှုခွင့်အလမ်းဘယ်လောက်အောင်မြင်စွာကစားများအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံအတွက်ပေါင်းသည်။
အနီေရာင္စတားဖဲချပ်သည်အခွင့်အဖဲချပ်ကစားရန်တူစစ်မှန်သောကစားသမားကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်။ အဆိုပါစနစ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုလုံးရုရှားနှင့်ယူကရိန်းဘာသာစကား၊ခွင့်ပြုသောသင်ဖဲချပ်ကစားရန်မည်သည့်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ။ ရှိပါတယ်နှစ်ခုအဓိကအမျိုးအစားများ၏အားကစားပြိုင်ပွဲ-ဖဲချပ်နိုနှင့်ကလပ်ဖဲချပ်။ဖဲချပ်ဂိမ်းအကြားလူတွေ၊တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်၊မဆန့်ကျင်အဆိုပါလောင်းကစားရုံအရောင်းကိုယ်စားလှယ်။ အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဖဲချပ်ကစားသမားတွေဝင်ငွေဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာဟာတစ်နှစ်ကို။ အတော်လေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်လူသိများတဲ့ဖဲကစားသမားရုရှားအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာ။ သင်တို့၏နာမကိုရိုက်ထည့်ပါအတွက်ရုရှားဖဲအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့မမေ့မလြော့ပါဖဲချပ်တစ်စိတ်အားကစား။ အနီရောင်ကြယ်၊သင်ဖဲချပ်ကစားများအတွက်အခမဲ့စတင်သင်တန်းအတွက်ငွေအတုသို့မဟုတ်ချက်ချင်းယူအစိတ်အပိုင်းအတွက်အခမဲ့ပြိုင်ပွဲ။ ယခု၊သင်ရနိုင်အ ၁၁၀ အပိုဆု၏ပထမဦးဆုံးသိုက်တက် ၆၀၀ ပဲတစ်သိုက်-နှင့်ရရန်တစ်ဦးအပိုဆောင်း ၁၁၀ ၎င်း၏ပမာဏ။ ဆုကြေးငွေအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်၊သင့်ရဲ့အကောင့်ကို။ စစ်မှန်သောရမှတ်ရရှိမှုပြီးနောက်လိုအပ်သောအရေအပိုဆုအချက်များဘို။ အသေးစိတ်အချက်အ ၊"ကိုင္"မီနူး။ အတွက်သက်သေနိုလောင်းကစားရုံ၊သင်သည်စွာအနားယူထိကြီးမားတဲ့ထီ။ အမှန်တရားပြောလိမ့်သင် မကစားအပေါ်တစ်ဦးအစွန်းရောက်အခါႏွသို့မဟုတ်အကြွေး.
မိုးလုံလေလုံအဖဲ၊အားလုံးကဒ်များနှင့်အလျောက်မျက်နှာမှဆင်းကစားသမား၊နှင့်အသီးအသီးကစားသမားနိုင်မှသာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်။ ဒီဖဲချပ်အမျိုးအစားများပါဝင်သည်:ဆြဲဖဲချပ်နှင့် ဆြဲဖဲချပ်။ အဆိုပါစကားလုံး"ဆွဲ"သောအမည်ဂိမ်းရဲ့နည်းလမ်း"အပြောင်းလဲနေတဲ့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကဒ်များ"၊အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်ဆြဲဖဲချပ်သည်အများအားဖြင့်"ကဒ်လဲလှယ်ဖဲ"။ ဆြဲဖဲကလူကြိုက်အများဆုံးအတွက်ကဒ်ကလပ်အသင်းအတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားအဘယ်ကြောင့်ဟူဖြစ်ပါသည်၊မကြာခဏအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်ကယ်လီဖိုးနီးယား။ဆြဲဖဲကတီးခတ်သည်နှင့်အညီကိုဂျက်သို့မဟုတ်ပိုကောင်းစည်းမျဉ်းများ၊ပြည်နယ်ကစားသမားသာဂိမ်းကိုဖွင့်နှင့်အတူဂျက် ပိုမိုပေါင်းစပ်။ ဆိုရင်ဒီဂိမ်းဟာကစားရဆိုဖွင့်လှစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ထိုအခါဂိမ်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူမည်သည့်ကနဦးပေါင်းစပ်။ အမည္ခံဆြဲဖဲချပ်။ ဒီဂိမ်းအတွက်အဆုရှင်သည်ထိုကစားသမားကိုသူအနိမ့်ဆုံးပေါင်းစပ်။ မှာပွင့်လင်းဖဲချပ်အချို့ကတ်များကိုအလျောက်မျက်နှာမှဆင်းကစားသမား၊နှင့်အချို့သောအထားမျက်နှာထိ-အပေါ်စားပွဲပေါ်မှာဒါကြောင့်သူတို့အမြင်အားဖြင့်အားလုံး။ အလှည့်တွင်၊ဖွင့်လှစ်-အဆုံးသတ်အဖဲချပ်သို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်နှစ်အမျိုးအစား:တွယ်ဖဲချပ်နှင့်နပ္ဖဲချပ်။ေရဲ့သဖဲ၊ကတ်များနှင့်အလျောက်မျက်နှာမှဆင်းအသီးအသီးကစားသမား၊နှင့်လာမည့်အကတ်များနှင့်အလျောက်မျက်နှာတက်။ အဆိုပါစကားလုံးဟုသတ်မှတ်ဂိမ်း၏နာမတော်အဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုသော"ကွဲပြားချက်"၊"အသီး"ဟုအဆိုပါကတ်များကိုအလျောက်အသီးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအတွက်။တွယ်ဖဲချပ်ဂိမ်းထည့်သွင်း:ခုနစ်ကတ်ရဲ့သဖဲချပ်-သားတွယ်ဖဲချပ်ပေါ်မှာခုနစ်ကတ်များနှင့်ငါးကတ်ရဲ့သဖဲချပ်-သားတွယ်ဖဲငါးကတ်များအပေါ်။ ခုနစ်-ကဒ်ရဲ့သဖဲရွေးချယ်မှု ကိုကဒ်ဂိမ်းအတွက်ကစားသမားနှင့်အတူနိမ့်ဆုံးကဒ်ပေါင်းစပ်နိုင်ရဟုခေါ်သည် ။ ညႇပ္ဖိဖဲချပ်၊သို့မဟုတ်နပ္ဂိမ္း၊အဖဲချပ်ဂိမ်းအတွက်ကစားသမားကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသော၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကတ်မျက်နှာအဆင်း၊ပြီးတော့ငါးသိုင်းကတ်များအထားမျက်နှာထိစားပွဲပေါ်အရာအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်အသီးအသီးကစားသမားစေဖို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေါင်းစပ်။ အဆိုပါအခေါ်အဝေါ်နပ္ရည်ညွှန်းသည်ပထမဦးဆုံးအသုံးအသိုင်း။ အဆိုပါစကားလုံး"နပ္"အဖြစ်ဘာသာပြန်"နပ္"၊"မျှော်လင့်ချက်အပြည့်"၊"ပျက်ကွက်"သို့မဟုတ်"အဖြစ်ရုတ်တရက်ပြောင်း"။ ဆံနပ္ကတ်များဖြင့်ဦးဆောင်ဖို့ဤသူအပေါင်းတို့သည်အကျိုးဆက်။ညႇပ္ဖိဖဲချပ်ဂိမ်းထည့်သွင်း:တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် 'သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာအကိုင် ' ကိုင် '။ ကိုင် မကြာခဏကစားအညီကင္-လိုတဲ့အခါ၊အနိုင်ရနှစ်ခုအကြားခွဲခြား။ ရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့်အမည်ဖြင့်၊ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးအခြေခံနှင့်စည်းမျဉ်း။ သိဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊သင်အလွယ်တကူခင်၏မည်သည့်အမျိုးအဖဲချပ်။ ကြောင့်အကြို-သဘောတူစည်းကမ်း၊မအစစ္ေပထမလာင္းကြားကာလ။ ထိုသို့ဖြစ်ခွင့်ပြု၊နှင့်အစဉ်အပိုင်းနေရာအလောင်းအစားသို့မဟုတ်ချက်ချင်းငြင်းကစားနေဆက်ပြီးမှ။ အစားပြင်ဆင်သည့် ၊တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကစားသမားလိုအပ်သောနေရာများကွဲပြားခြားနားသောပမာဏအနည်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအလောင်းကြားကာလ။ အသားရိုင်းကဒ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဂိမ်းအတွက်၊အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအေ့စ်အဖြစ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ကဒ်အောင်အတွက်အဖြောင့်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်း။အတွက်အဆိုပါဖော်ပြချက်များ၏ဤဂိမ်းနှင့်အခြားစည်းမျဉ်းများဆွေးနွေးကြမည်သေးစိတ်အတွက်။ ကဒ်ပေါင်းစပ်ကြသည်တွင်ဖော်ပြထားတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုနိုင်ရန်အဓိပ္ပာယ်၊အသီးအသီးနောက်ဆက်တွဲပေါင်းစပ်အပေါ်အနိုင်ရမည်သည့်ယခင်တစျခု။ အမြင့်မားဆုံးကဒ်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည်မပါဘဲမည်သည့်ကဒ်ပေါင်းစပ်။ အခြားမည်သည်ဤပေါင်းစပ်နှင့်အမှိုက်သရိုက်။ လျှင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုကစားသမားတွေဤပေါင်းစပ်၊ထို့နောက်အတူအမြင့်မားဆုံးကဒ်အနိုင်ရ။ လျှင်အမြင့်ဆုံးကတ်များ၏ကစားသမားနှင့်အတူအဆင့်၊ထို့နောက်လာမည့်အမြင့်မားဆုံးကဒ်အစဉ်းစားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျော်အနိုင်ရဋ ။ ပါကရာထူး၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကတ်များနှင့်ကိုက်၊အများက်၏တတိယကဒ္စဉ်းစားသည်၊စသည်တို့ကို။ အဟောင်းတွေ အတွဲစည်းချက်မည်သည့်အငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊၉-၉-၅-၃-၂ ကျော်အနိုင်ရ -၈-၈။လျှင်နှစ်ခုကစားသမားများအားလုံး၏တူညီသောအဆင့်၊ထို့နောက်အနိုင်ရအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်များက်၏ကဒ်များအကြောင်းမကိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်၊၈-၈-၉-၅-၃ ကျော်အနိုင်ရ ၈-၈-၉-၅-၂။ အခါအဆုံးအဖြတ်များက်၏နှစ်ဦးလုံး၊အတိုကောက်အခေါ်အဝေါ်များသောအားဖြင့်အသုံးပြု၊သောအဟောင်းတွေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊အဆိုပါပေါင်းဃ-ဃ - ဒါဟာဟုခေါ်သောမင်းသမီး။လျှင်နှစ်ခုကစားသမားနှစ်ဦးလုံးအတွက်၊ထိုအခါတယောက်နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအပီရံ။ ဥပမာအားဖြင့်၊-ဋ - ကျော်အနိုင်ရဃ-ဃ -။လျှင်ကစားသမားတွေအများအနှစ်အားလုံး၏တူညီသောမျက်နှာတန်ဖိုး၊ထိုအခါတယောက်နှင့်အတူဒုတိယတွဲပိုမိုမြင့်မား။ ဥပမာအားဖြင့်၊-ဋ - စည်းချက်-ဋ -။အားလုံးလေးကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ကဒ်၊ထိုအခါတယောက်နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအဆင့်အမှတ်တမ်းကဒ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊၉-၉-၇-၇-၅ ကျော်အနိုင်ရ ၉-၉-၇-၇-၄။ သုံးဆ သုံးကတ်များ၏တူညီသောအဆင့်နှင့်အတူနှစ်ဦးမ-သင့္ေတာ္ေသာ။ အများအားဖြင့်၊နာမတော်အပေါင်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်၏ရာထူးကိုကဒ်များ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သုံးဦးရာဇဝငျ၊သုံးဝဂ်ပြီး၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ ဆိုရင်သူတို့သုံးကဒ်၊ထိုအခါတယောက်နှင့်အတူသုံးကတ်များ၏အမြင့်ဆုံးရာထူးအနိုင်ရ။ ဥပမာအားဖြင့်၊၇-၇-၇-၃-၂ ကျော်အနိုင်ရ-ဃ -။ လျှင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုကစားသမားတွေအများအဖြောင့်အနိုင်ရသူစတင်သည်နှင့်အတူအမြင့်မား။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဖြောင့်ကနေဃ သို့တစ်ဦးအနေဖြင့်ဖြောင့် ၉-၈-၇-၆-၅ ကိုး။မှတ်ချက်:အဆိုပါအေ့စ်အသုံးပြုနိုင်သာအောင်များအတွက်အမြင့်ဆုံးဖြောင့်ပေါင်းစပ် တီ ၁၀၊ဒါပေမဲ့လည်းအနိမ့်ဆုံးအဆက်မပြတ် -တီ၊အဘယ်မှာရှိရေတွက်အဖြစ်။ လျှင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုကစားသမားတွေရှိသည်အရပ်ကို၊အဆိုပါဆုအားအမြင့်မားဆုံးကဒ်။ လျှင်အမြင့်ဆုံးကတ်များရှိသည်တူညီတဲ့ရာထူး၊ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဒုတိယအမြင့်မားဆုံးကဒ်ပြီးတော့ဥပမာအားဖြင့်?ဋ-?-? ၇-?၆-?၂ စည်းချက်?ဋ-?ေ-?-?-?အပြည့်အဝအိမ်သုံးကတ်များကိုအတူတူရာထူးတူနှစ်ခုကတ်များ၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား၊ဆိုလိုသည်မှာအသုံးအစုံ။ လျှင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုကစားသမားတွေအပြည့်အဝအိမ်၊ထို့နောက်သူကသုံးဖက်ကတ်များ၏အဆင့်မြင့်ရာထူးကိုအနိုင်ပေး။ ဥပမာအားဖြင့်၊၇-၇-၇-၅-၅ ကျော်အနိုင်ရ-ဋ -။ ရှိပါတယ်လျှင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောလူ လျှင်နှစ်ယောက်ရှိသည်၊ထိုအခါတယောက်နှင့်အတူလေးဖက်ကတ်များ၏အဆင့်မြင့်ရာထူးကိုအနိုင်ပေး။ ဥပမာအားဖြင့်၊၇-၇-၇-၇-၃ ကျော်အနိုင်ရဋ ။ လျှင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုကစားသမားတွေတစ်ဖြောင့်ဆေးကြော၊ထို့နောက်အမြင့်ဆုံးဖြောင့်ကဒ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဖြောင့်ရပ်မှအမျိုးသမီးတစ်ဦး?ဃ-?-? ၁၀-?၉-?၈ ပတ္အဖြောင့်ရပ်ကနေကိုး?-?-?-?-?. ကဒ်အကိုက်မကိုအကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသောအခါအဆုံးအဖြတ်များက်ပေါင်းစပ်၏။ သို့သော်၊အကိုက်အႏိုဆုံးဖြတ်ရန်နိမ့်ဆုံးကဒ်အခါကကနဦးအလောင်းအစားအမြန်လောင်း၌တွယ်ဖဲချပ်အဖြစ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကစားသမားအဘယ်သူသည်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်တစ်ခုထူးဆန်းကစားပ်ဖြစ်အပျက်အတွက်၏တစ်ဦးအုပ်စုခွဲအနိုင်ရနှစ်ခုအကြားကစားသမားမင်္ဂလာပါအတွက်-လို။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်၊အမိန့်များ၏ဝတ်စုံအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်:ဂေါ်ပြား၊နှလုံး၊စိန်ပွင့်၊ကလပ်အသင်း၊အဘယ်မှာလူတွေအမြင့်ဆုံး။.
အကြောင်းအအာရှဖဲကွန်ယက် ဖဲကွန်ယက်လူသိများဖြစ်လာမဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့။ ေ၂၀၁၇၊အကျေအလုံးအရင်းနဲ့စတင်အာရွအခါ၊နှင့်ကွန်ယက်ရှိယူဦးဆောင်အနေအထားအားလုံးတို့တွင်ဖဲရိွအခန္းမ်ားအတွက်ကမ္ဘာ၏စည်းကမ်းချက်များ၏အရေအတွက်အွန်လိုင်းကစားသမားတွေ။ ထိုကဲ့သို့သောလျင်မြန်စွာတိုးမြှင့်လူကြိုက်များအတွက်လည်းစိတ်ဝင်စားဥရောပတိုက်၊သို့သော်ကနဦးအဆင့်မှာသူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နှင့်အတူပြင်းထန်သောပြဿနာ၏မရှိခြင်း-အဖို့စွမ်းရည်ကိုငြျဖသူတို့ရဲ့အကောင့်နဲ့အနိုင်ရရှိဆုတ်ခွာအားလုံးငွေပေးချေမှုစနစ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်အာရှတိုက်။ ဒါပေမယ့်လုပ်ငန်းမရပ်ဆဲနဲ့အပြီးတွင် ၂၀၁၈၊အများအပြားဥရောပဖဲခန္းမ်ားအကြန္ယက္၊ခွင့်ပြုမှကစားသမားများဥရောပနှင့် နိုင်ငံများမှအောင်သိုက်နှင့် ။ ဒါဟာအဲဒီဖဲချပ်ခန္းမ်ားကြောင်းသင်ပြောပြလိမ့်မယ်ငါတို့၏ဆောင်းပါးထဲမှာ။ ဖဲဆော့ဖ်ဝဲကိုအားလုံးအတွက်အွန်လိုင်းဖဲချပ်ခန္းမ်ား ဖဲကွန်ယက်ဖြစ်ပါသည် ၁၀၀ အညီ၊သာလိုဂိုပေါ်အဖဲချပ်ဇယားကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုအကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်ရှိနေသော်လည်း၎င်း၏အရွယ်အလုပ်လုပ်တယ် မပါဘဲကျန်ရစ်နှင့်ဆိုင်းငံ့။ တစ်ခုလုံးကိုအသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အပန်းဖြေကစားသမားပျော်တမ်း:ကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်ရေး၏ကာတွန်း ၊ရယ်စရာအဖုံဖုံအသီးအသီးဖဲအခြေအနေ၊စွမ်းရည်မှအာမခံ၏လက်အတွင်းအားလုံးအတွက်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဖြန့်ဝေဘုတ်အဖွဲ့အခါအားလုံးအတွက်သုံးကြိမ်အထိတစ်တန်းအတွက်ဒါကြောင့်ပြေး၊၃ ကြိမ်၏မျိုးကွဲအားကစားပြိုင်ပွဲတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အဆိုပါ ဖဲကွန်ရက်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် ငြကန့်သတ်မှ ၁၀ အ ၁၀၀၀ ပြည့်စုံလျက်ရှိလွန်တက်ကြွစွာ၊ အိုးကန့်သတ်ငွေသားအလုပ်အကိုင်နှင့်ကန့်သတ်ဆင်တူပါတယ်၊ ပြိုင်ပွဲရာင္းရန္-$၁ ရန်$၁၀၀၊ထက်မပို ၃၀၀ သင်တန်းသားများကို၊အားလုံးအတွက်သို့မဟုတ်အခေါက်အစာရှောင်ဗားရှင်းအစားငွေသားနှင့်အတူဂိမ်းနှစ်ဦးလုံးအတွက်သို့မဟုတ်အခေါက်ရွေးဒါကြောင့်လည်းဖော်ပြရကျိုးနပ်ကွန်ယက်ကျယ်ပြန့်ရာထူးမှရရှိနိုင်အားလုံး ဖဲကွန်ရက်ကစားသမား။ အဓိကမြှင့်တင်ရေးငွေသားအဘို့ကစားသမားတစ်ဦးအထူးသီးသန့်အဆင့်အတန်းစနစ် ငါးဘူဖေး။ ဒီစနစ်ထဲမှာကစားသမားကိုဖြတ်သန်းသွားရပါလိမ့်မယ်များအပြားအဆင့်ဆင့်၏အွန်လိုင်းဖဲချပ်နှင့်အတူစတင်မျောနှင့်အတူအဆုံးသတ်အငါးမန်း။ ထို့အပြင်၊ကွဲပြားခြားနားသောဆိုက်ကိုဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်။ဥပမာအားဖြင့်၊သင်တစ်ဦးငါးမန်းအ၊အများဆုံးဂုဏ်သိက္ခာကိုဆိုက်ကို၊လိုအပ်သည်လစဉ်အတည်ပြုပြီး၊မျောလိုအပ်သည်နေ့စဉ်အတည္ျ။ ရှိပါတယ်ကိုလည်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအပတ်စဉ်အတည္ျ။ ဒါကြောင့်အခါ၊ရွေ့လျားအသစ်တစ်ခုအဆင့်၊အဆိုပါကစားသမားပေးတယောက်လှည့်ဖျား၏ဘီး၊အရာသူ့ကိုအာမခံငွေပေးချေ၏အအာက္ကလိုအပ်ရွှေ့ဖို့ဒီအဆင့်။ ပျမ်းမျှ ရာခိုင်နှုန်းအသီးအသီးအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ပြီးနှုန်းမှ ၁၅ အတွက်ရေမျောအဆင့်မှ ၅၀ အတွက်ငါးမန်းအဆင့်။ ဒါပေမယ့်ငင်ဘီးကို၎င်းဒြပ်စင်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတတ်သင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရဖို့ပင် ၁၀၀ အာက္ကအတွက်ငါးမန်းအဆင့်အတန်း။ ကစားသမားတွေများအတွက်အကြောင်း-စားပွဲပြိုင်ပွဲ၊တစ်ဦးကိုလစဉ်လည်းရှိ၏ပြိုင်ပွဲအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်$၁၀၀၊၀၀၀။ အသီးအသီးပါဝင်ပြိုင်ပွဲအတွက်များအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ၊အဆိုပါကစားသမားဆုပြိုင်ပွဲမှတ်စီးတီး၊ရာပေါ်မူတည်သုံးခုညွှန်းကိန်းများ:ေရာင္းရန္-သာ၏ပြိုင်ပွဲ၊ အရပျယူနှင့်အရေအတွက်သင်တန်းသားများ၏။ သင်မြင်သင့်နေရာအတွက်ပြိုင်ပွဲအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်သွားဖို့အစီအစဥ္သည္စာမျက်နှာကနေအဓိကအဧည့်ခန်း၏အခန်း။ မှာလတစ်လရဲ့အဆုံး၊အဆိုပါထိပ်တန်း ၁၀၀ အကောင်းဆုံးကစားသမားမျှဝေပါလိမ့်မယ်အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်၊အတွက်နှင့်ပင်ပြီးခဲ့သည့်ဆုနေရာ၊အဆိုပါဆုသည်အလွန်အထင်ကြီးမှာ$၅၀၀၊အစဉ်ဆုရှင်ရလိမ့်မယ်အဖြစ်ကြီးအဖြစ်$၁၀၊၀၀၀။ တစျခုကထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်အ ။ အခန်းများအတွက်သင့်လျော်သည်ဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအရင်ကဆိုရင်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊အရင်ကဆိုရင်အကြိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာသင်လှည့်ဖျားမရှိဘဲအန္တရာယ်မှကျေးဇူးတင်စကားတစ်အရေအင္စား ၊နေရာယူသောအပတ်စဉ်အပေါ်အခြေခံ။ လည်းမှတ်သားထိုက်သည်အမား၂၀၀အပိုဆုအပေါ်ပထမဦးဆုံးသိုက်တက်ဖို့$၁၀၀၀။ အကောင်းဆုံးအဖဲချပ်သည်အခြားဥရောပဖဲအခန်းကအသုံးပြုခံရဖို့အစိတ်အပိုင်းအ ဖဲချပ်။ ဆိုက်ရှိပါတယ်တစ်ဦးကောင်းဒီဇိုင်းနှင့်လျော်စွာကောင်းကင်ဗိုလ်သီးသန့်များအပြားဖဲချပ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကတော့အ ပထမဦးဆုံးအကြန္ပ်ဴတာမွညိွေပးသည္။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်တစ်လတစ်ကြိမ်နှင့်ဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်များ$၁၀၀၀။ သင်ရုံရန်လိုအပ်ထည့်ဖို့ဒါဟာသင့်ရဲ့အချိန်ဇယားနှင့်အကြောင်းမမေ့ပါနဲ့။ အရေအတွက်ကစားသမားဒါကြောင့်အသေးစားပေးသည်အကောင်းဆုံးအခွင့်အဆောက်အအုံတစ်ခုမစတင် ၅ မှ ၂၀ သင်တန်းသားများကို။ အခန်းအစပိုင်းလာနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့ရာထူးအတွက်ဥပမာ၊မေရှိ များအတွက်လက်မှတ်ကိုဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားပွဲအတွက်ရုရှားနိုင်ငံအပါအဝင်ပိုက်ဆံအတွက်လေကြောင်းခရီးနှင့်ဟိုတယ်၌နေထိုင်ရန်။ အ ဖဲအခန်းအလားတူအစုံရှိပါတယ်ကွန်ယက်ကျယ်ပြန့်ပရိုမိုးရှင်း၊နှင့်လည်းခွင့်ပြု၏နေထိုင်သူများဥရောပနှင့် နိုင်ငံများမှကစားပါ။ အကြား၎င်း၏အင်္ဂါ၊ဒါကြောင့်မှတ်သားထိုက်သည်များအတွက်ဆုကြေးငွေအောင်သိုက်ထဲတွင်ထားနိုင်သည်။ အပေါ်မူတည်ငြပမာဏ၏၊သင်ကအပိုဆုအတွက်ငွေပမာဏကနေ$၅ ရန်$၃၀၀။.
အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ ၁၀၀၀ ရူကနေ
သည် လူကြိုက်အများဆုံးဖဲချပ်များအတွက်အခန်း-ရုရှစကားပြောကစားသမား၊အရာလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ရရှိမှုမားသောလူကြိုက်များ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးရီးပြိုင်ပွဲ၊၊ကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုး၏ဖဲချပ်ဂိမ်းနှင့်အများကြီးပိုပြီးဖြစ်ကြောင်းသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေအခန်းအတွက်။ သို့သော်ထိုထက်ကျော်လွန်။၊ မှန်မှန်ဆုလာဘ်၎င်း၏ကစားသမားများ။ ကစားသောသူတို့အဆက်မပြတ်မှတ်ချက်အကောင်းဆုံးအပိုဆုအစီအစဉ်အတွက်သူတို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ဤအချိန်မြှင့်တင်ရေးခဲ့စတင်ခဲ့များအတွက်အဘယ်သူသည်နယူးကစားသမားတွေရနိုင်တစ်ဦးမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ ၁၀၀၀ ရူသို့မဟုတ်$၁၀ ပေါ်မူတည်ပြီး၊အဆိုပါဂိမ်းအကောင့်ကို။ ဒါဟာအရေးကြီးသောအနိုင်ရမှဤအပိုဆုကြေးမတောင်းမခံ၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးစေအသိုက်မှသူတို့ကိုလက်ခံရရှိ။ ထို့ကြောင့်၊ဤတစ်ဖြစ်ပါသည်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်ရဖို့အကျွမ်းနှင့်အတူအခန်းမှာသင်၏လက်ကိုကြိုးစားကစားများအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ။ နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အဖို့စတင်ကြောင်းသင်ယူအွန်လိုင်းဖဲချပ်သို့မဟုတ်အဘို့အရှာကြသည်အသစ်တစ်ခုကိုအခန်းကစားရန်အတွက်၊ထို့နောက်ဤအသင်တို့အဘို့အမှန်သည်။ သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့အဆင်ပြေရဖို့ရှာတွေ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်း။ ၏စောင့်ရှောက်မှုကြာ၎င်း၏ကစားသမား၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုအပိုင်းများကိုမှန်မှန် "ရာထူး"မှတက်စောင့်ရှောက်ရန်နေ့စွဲနှင့်အတူအားလုံးလက်ရှိကမ်းလှမ်း။
ဂြိုဟ်တုမှာဖဲချပ်များမှာခြေစစ်ပွဲပြိုင်ပွဲအတွက်ကစားသမားအဘယ်သူသည်အနိုင်ရရှိဆုချီးမြှင့်ကြသည်မဟုတ်၊ဒါပေမယ့်အခြား၊ပိုပြီးစျေးကြီးသူများ ပြိုင်ပွဲ။ အရည်အချင်းခွင့်ပြုကြောင်းအားကစားစျေးပေါအတွက်ကြီးမား ၏အမှု၌အောင်ပွဲအတော်လေးဘုံ၊နှင့်ပျော်မွေ့ကောင်းမွန်စွာထိုက်တန်တဲ့လူကြိုက်များကြား ။ အမျိုးအစားပြိုင်ပွဲဆွေးနွေးဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားဂန္"တိုက်ခန်း"ပေးချေမှုဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ အများစုအတွက်ဂြိုဟ်တု၊ပထမနေရာစားသမားရရှိအတူဆုချီးမြှင့်အဖြစ်ဆယ်-နေရာ။ လည်းရှိပါတယ်၊ခြွင်းချက်–၊အရာအတွက်လက်မှတ်ချီးမြှင့်ကြသည်ကို အပေါ်မူတည်ပြီးနေရာယူ၊ဒါပေမယ့်သူတို့ရှားပါးသောဖြစ်ကြ၏။ ဒီနည်းလမ်းသင်အနိုင်ရဖို့မလိုအပ်ပါဘူးရှိသမျှကိုအခွံနှင့်အဆက်မပြတ်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားသူတို့ရဲ့ရေ၊စွန့်တစ်ဦးလေယာဉ်ပျက်ကျ၊အဓိကအရာသည်ရောက်ရန်ဆုချီးမြှင့်ငွေ။ ရဲ့တစ်ဦးကြည့်ကြရမှာလူကြိုက်အများဆုံးဟာဗျူဟာများအဘို့ကစားအတွက်အရည်အချင်းပြိုင်ပွဲ။ ၏ကနဦးအဆင့်မှာအရည်အချင်းပြိုင်ပွဲ၊စားဖွယ်တင်းကျပ်စွာနှင့်ဂရုတစိုက်။ သင်အပေါ်ထားနှံများကိုပုံလျှင်တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအားသာချက်ကို၊ဥပမာအားဖြင့်၊သည့်အခါတစ်စုံတစ်ယောက်ကဖို့အဆင်သင့်ရတယ်အတူ သို့မဟုတ်ဝဂ်ဆန့်ကျင်။ ဘးချစ်ပ်များ၏ထက်ပိုအရေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ဆကတည်းကမတိုးပါဘူး ၂ ကြိမ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေသို့ရတဲ့ဆု။ အတွက်အစောပိုင်းအလုပ္အကိုင္၊အဘယ်သူမျှမသဘာဝကျပါတယ်နှင့်အတူကစားရန်အနိမ့်လုံးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ရအတြင္းရွိသတၱဳတူးေ–တုန့်ပြန်ဖို့ ၃၊သင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်၊နှင့်ယူချင်တယ်ဆိုရင်သင်အန္တရာယ်နှင့်သွားအားလုံးအတွက်၊သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အ အကောင်းဆုံးမှာ။ ရှိကစားသမားတွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စားသင့်ရဲ့ချစ်ပ်၊ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်သင်သည်တဲ့ယူရပါလိမ့်မယ်အန္တရာယ်အဘယ်သူမျှမအစဉ်အနိုင်ရတဲ့ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်အဆက်မပြတ်နှိပ်"ခေါက်"။
အဖြစ်ကြီးမားတဲ့အစုတွေကိုခိုးယူရန်ကြိုးစားသောမျက်စိကန်းသို့မဟုတ်အိုးကိုယူဘဲအဖွင့်နှင့်အတူအဆက်အလောင်းအစား။ အဘို့မစောင့်ပါနဲ့ယံအလက်၊ဒါပေမယ့်မနှင့်အတူကစားမကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေ။ သတိထားဆန့်ကျင်သူတို့ထိတွေ့နှင့်အတူကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွက်တုန့်ပြန်၏အဖွင့်မြှင့်တင်ရန်။ နှင့်အတူတစ်ဦးအလတ်စားစု၊ပွင့်လင်းတဲ့တွန်းအားကိုဆန့်ကျင်ကြီးမားတဲ့အစုလိုက်အကောင်းဂိမ်း။ ရှိသည်ဆိုလျှင် ၁၅ ဘီဘီနှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်ရှိပါတယ် ၂၅၊ခက်ခဲပြီးအဘို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်၊သူ့ကိုမခေါ်သင့် ၊အဖြစ်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်လျှော့ချအနက်မိမိ၏အခွင့်အလမ်းသို့ရတဲ့ဆုချီးမြှင့်ငွေ။ ဆန့်ကျင် ၊ဤအတူပြုယံပေါင်းစပ်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အ ကိုယ် ဆန့်ကျင်ပိုပြီးမကြာခဏ ကစားသမားတွေရှိသည်သောသူ ၁။၂-၁။၈ ဆပိုချစ်ပ်ထက်သင်ရှိသည်–သူတို့မကြာခဏကြောက်လန့်ဖြစ်ရမှဖွင့်လှစ်သင်အဖြစ်၊မတူကျန်ကြွင်းနီးပါးဘာမှမ။ -အမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်အဖမ်း ၃၊အပါအဝင်ကြီးမားသောသူများ။ တွေကိုခိုးယူရန်ကြိုးစားသောဝန်ဆောင်အဖြစ်အတတ်နိုင်ဆုံး၊သူတို့ကိုအကာအကွယ်မှခလုတ်ကိုနှင့် ၊ရှောင်ရှားအန္တရာယ်အခြေအနေအရပ်အနက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုသို့ရောက်ရှိ။ သင်ဆဲပါကလိုေခၚတဲ့တွန်း၊ပထမဦးဆုံးစဉ်းစားသင့်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ရောင်စဉ်တန်းနှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့ပေါင်းစပ်ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ၊သင်တန်းသားများကိုအများစုရှိလာသို့မဟုတ်နီးပါးဖြစ်လာ။ အကြောင်းကတော့ကြီးမားတဲ့စနစ်ရှိသည်မန္မာေအာမခံမိမိတို့အရပ်၌ဆု၊နှင့်အန္တာရာယ်မှမလိုချင်သူတို့၏လက်မှတ်များ၊နှင့်အလတ်စားစနစ်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်အတိုအမြားပျံသန်းဖို့။ တချိန်တည်းမှာပင်၊အဆင့်အော်တိုလေလံကိုအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာ။ သင့်အတွက်နေရာအရေအခွံနှင့်အတူသိသိသာသာမားေသာအဆု၊သင်ရုံစောင့်ဆိုင်း၊ထွက်ပစ်ထွက်အသီးအသီး။ ဟုတ်ကဲ့၊ပင်အေ့စ်၊မရှိသောကြောင့်အကြားခြားနားချက်ကိုဆယ်နဲ့ပထမဦးဆုံးသောအရပ်တို့ကိုသာဂြိုဟ်တု။ ပါက သင့်ရဲ့အရေအတွက်မီတာအတွက်အနီရောင်သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်ဇုန္၊ နှောင်းပိုင်းမှရာထူးမှအတိုက်အခံနှင့်အတူအလားတူအစုအရွယ်အစား–သူတို့အမည်သာခေါ်နှင့်အတူအောက်မေ့သောအခါရွေးချယ်ခြင်း" သို့မဟုတ်အခေါက်"၊ထိုအစုအရွယ်နှင့်အနေအထားပင်ထက်ပိုအရေးပေါင်းစပ်။ ဘယ်ဂြိုလ်တုမှာဖဲချပ်–ငွေကြေးကိုတစ်ဦးစွန့်ပစ်သို့မဟုတ်အဆင်ပြေတဲ့လမ်းရဖို့စျေးပေါလက်မှတ်မှအဓိကပြိုင်ပွဲ? ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေပေါ်မူတည်ပါသည်–သင်ယူလျှင်၊သင်အခြေစစ်ပွဲဂိမ်းများအနက်နှင့်ကပ်ဖို့တစ်ခုမှာအပြုသဘောမဟာဗျူဟာရလဒ်မည်မဟုတ်ရေရှည်အတွက်လာမယ့်။.
အတည်ပြုပေါ် လာခဲ့သည်မဖြစ်မနေ ဖဲ ကုန္သြယ္သ
၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအ ကြန္ယက္၊ပိသင္မေနရသည့္စနစ္ကစားသမားမွစ၍ၾသဂုတ္လ ၃၊၂၀၂၀။ ဒါဟာသတိပြုကြပြီမဟုတ်သူလူများအောင်မြင်ည့္စနစ္အခန်းထဲမှာဆော့ကစားနိုင်လိမ့်မည်၊ဒါပေမယ့်လိမ့်မည်မဟုတ်နိုင်ငြသြင္း ထုတ္လိုရန်ပုံငွေက်ာ္အ$၂၊၀၀၀။ သဘာဝကျကျ၊စိစတင်မိတ်ဆက်သည်အားဖြင့်အခန်းတစ်ခန်းစီမံကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ရိုးသားကစားသမားအဖြစ်အများကြီးကနေတတ်နိုင်သမျှအများ၏အပြုအမူဘမ်းမုဆိုး၊ပိုင်ရှင်အများအပြားအကောင့်အသစ်များ၏နှင့်အခြားလိမ်လည်။ ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်အဖြစ်မတည်ပြုချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုသေချာစေနိုင်ပါတယ်သင့်အားသူတို့၏အကောင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပိတ္ဆိုအားဖြင့်အခန်းရဲ့လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုရင်သူတို့မကျင့်ကိုချိုးဖောက်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊နှင့်ပိုက်ဆံထုတ်ယူနိုင်ပါသည်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲ။ ဖွယ်ရှိသည်အနီးအနာဂတ်၊မဖြစ်မနေဝိသေသလက္ခဏာအတည်ပြုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ယူနေရာအားလုံးအတွက်ဖဲချပ်သောအခန်းပေါင်း၏အစိတ်အပိုင်းအ ။ ထိုသို့၊ရှိလိမ့်မည်မရှိတော့သောအခြေအခါမှာတချို့ကစားသမားတွေပြသလိမ့်မည်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဇယား၏အဓိကပြိုင်ပွဲတွင်ကျင်းပခဲ့သောအခန်း၏အ ဖဲကွန်ယက်အောက်တွင်၎င်းတို့၏အမည်များနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်း–အောက်မှာဝှက်။ သဘာဝကျကျ၊ဒီအခြေအနေဖြင့်တွင်ထားသည်အနေ၊အရာအချို့သူတို့နေဆဲအတော်လေးဖြစ်နိုင်ကျေနပ်နှင့်အတူ။
ဖဲစိတ်ဝင်စားစရာကဒ်ဂိမ်းအားဖြင့်ကစား၏သန်းပေါင်းများစွာကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူ။ အထောက်အထား၏ဤအချက်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်ဒီနေ့ခေတ်အမျိုးမျိုးသောကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖဲချပ်ချန်ပီယံများမှာအလွန်မကြာခဏကျင်းပခဲ့ပြီး၊နေရာရဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လာမှဆုနှင့်အနိုင်ရအလွန်အဝိုင္းငွေကြေး၏ပမာဏ။ လျှင်စောနိုင်ရန်အတွက်ဖဲချပ်ကစားရန်၊လူတွေအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းရန်မှာကဒ်အတွက်ဇယားတစ်ဦးလောင်းကစားရုံသို့မဟုတ်အခြားနေရာအရပ်ပျော်မွေ့ဖို့သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းတော့၊လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ရှိခဲ့စက္ပပေါက်စက်များသောအရပ်၌ကာစီနိုလောင်းကစားရုံခွင့်ဖဲချပ်ချစ်သူများအားကစားသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားအတူ၊ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုတစ်ခု။ ယနေ့အဖြစ်၊ခေတ်မီနည်းပညာသွားကြပြီပင်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊လူအနိုင်ကစားဖဲသွင်ပေါက်စက်များလမ်းဖြင့်၊ဒီမှာလင့်ခ်၊ အရာအထူးအစီအစဉ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအင်တာနက်အပေါ်၊သောဟုခေါ်ကြသည်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ။ ဤဆိုဒ်များဖို့ခွင့်ပြုအွန်လိုင်းငွေရှာကစားခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းရုံဖြင့်ဝင်ရောက်ဂိမ်းအခန်း။ အချို့လူများကသူကြိုးစားခဲ့ကစားဖဲချပ်ပေါ်တစ်စက်ရှေ့တော်၌တွေ့စေခြင်းငှါအတော်လေးခက်ခဲလေ့လာဖို့မည်သို့ထိုသို့ပြုမှ။ သူတို့အကြောင်းထင်စေခြင်းငှါလိုအပ်သောလေ့ကျင့်ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့၊အဖြစ်ဖတ်ငြီးငွေ့ဖွယ်ညွှန်ကြားချက်များကိုစတင်ရှေ့တော်၌သူတို့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း။တကယ်တော့၊အရာအားလုံးကွဲပြားခြားနားသည်။ မေးလျှင်သင်မည်သည့်လောင်းကစားသူ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိပါသည်ဖဲချပ်ကစားခြင်းအပေါ်ပေါက်စက်များ၊သူတို့သည်သင့်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မခက်ခဲသည်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်ဤစိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်းအတွက်အပေါက်စက်များ။ ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်၊ဒါကြောင့်အများကြီးပိုပြီးခက်ခဲကျွမ်းကျင်ဖို့အပေါင်းတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖဲ၊အရာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာကစားခြင်းကိုလောင်းကစား။ အဖြစ်အတွက်ဖဲချပ်အင်တာနက်ပေါ်မှာအများအကူအညီဖြင့်များပေါက်စက်များ၊ဒါကြောင့်မခက်ခဲသည်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကစား။ ဒီအားဖြင့် တစ်ကျွမ်းကျင်မှုနိုင်ကျွမ်းကျင်မှာအတော်အတန်ကောင်းမွန်သောအဆင့်အနေဖြင့်ပကတိသုညအနည်းငယ်အတွက်နာရီ။ အမှန်ပင်၊သခင်အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုကစားခြင်း၏ဖဲချပ်ပေါ်တစ်စက်၊အလုံအလောက်သုံးစွဲဖို့နာရီပေါင်းများစွာ၏အချိန်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖဲသမား၊ဒါကြောင့်သေချာပေါက်အများကြီးကြာကြာယူနိုင်ပါသည်၊သင်ပင်လျှင်ဆန့်ကျင်ကစားထည့်တဲ့စက်တစ်လုံး။ အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်လာမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖဲသမားစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့အကျင့်။ အပိုအလေ့အကျင့်ပိုကောင်း၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကစားနှင့်အပိုကြီးပမာဏနိုင်ပါလိမ့်မည်။
တြင္ ၂၀၀၁၊နိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံးအဖဲရိွအခန္းမ်ား။ ထိုကတည်းက၊ဒါကြောင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ထက်ပိုမိုသုံးဆယ်သန်းအသုံးပြုသူများနှင့်ယနေ့အချိန်တွင်ဤစီမံကိန်းသည်ဥရောပတိုက်ဦးဆောင်အနေအထားအတွက်ဖဲချပ်။ ေရှစ်နှစ်၏အောင်မြင်သောစစ်ဆင်ရေး၊အခန်းအဖြစ်ဂုဏ်သတင်းတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအမှတ်တံဆိပ်၏သန်းပေါင်းများစွာကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကမ္ဘာအဝှမ်းကစားသမားတွေ။ အတွက် ၂၀၁၁၊ တူပေါင်းစည်းအားကစားလောင်းကစားဧ ဖွဲ့စည်းရန် ။ပါတီ။ အစမှာ ၂၀၁၆၊အရေးအပြောင်းအလဲအရပျကိုယူနောက်တဖန်အ၊အရာနေဆဲဆုံးဖြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်၏။ ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း ဝယ်ယူရှိသမျှတို့ကိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုယင်းကုမ္ပဏီ၏။ပါတီများအတွက်$၁။၇ ဘီလီယံခန့်၊အဓိကရှယ်ယာ။ ဖဲအခန်းရှိအဘရောလ်လောင်းကစားလိုင်စင်နှင့်ခြုံနှင့်အတူတင်းကျပ်တဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဗြိတိန်နိုင်ငံကလောင်းကစားကော်မရှင်၊အတည်ပြုပေးသောအမြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးများ၏။ ဖဲအခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်ထပ်ခါတလဲလဲလိမ့်မည်သိက္ခာဆုအတွက်လောင်းကစားလုပ်ငန်း၊၂၀၁၇၊၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်အဖြစ်"အ လိုင်းကိုထောက်ခံအားလုံးလူကြိုက်များလည်ပတ်စနစ်များ၊နှင့်ဂိမ်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးမှန်ကန်ပိုက်ဆံနှင့်ခြွင်းချက်ချစ်ပ်။ ပရိသတ်၏ဖဲချပ်ကစားခြင်းအပေါ်သွားလိမ့်မည်လည်းကျေနပ်သောကြောင့်၊ဖဲအခန်းမှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်အခြေခံစ်ပိုးအခမဲ့။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်၏အခန်းမှ ။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်တစ်ဖေါ်ပြချက်၏အခန်းနှင့်အဖြေများကိုလူကြိုက်အများဆုံးမေးခွန်းတွေအကြောင်းအဆိုပါလုပ်ငန်း၏အခန်း။ " ဆောင်ခဲ့သည်ကျန်းမာသောယှဉ်ပြိုင်မှုနောက်ကျောကိုစျေးကွက်မှ။ အသစ်နှင့်လတ်ဆတ်သောလေထုကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖဲအသိုင်းအ"ူ ေဖာ္ျမမူသောအဆင်တူဒီဇိုင်း၏အခြားအဖဲချပ်။ မိုလ်အစဉ်အကောင့်သို့ယူဆန္ဒကိုနှင့်မှန်မှန်ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်အသုံးပြုသူအလိုလိုေရာက္သြားသောဧည့်ခန်းနဲ့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အလိုရှိသောဂိမ်းအတွက်အတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ ခေတ်တွင်အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းပညာ၊မည်သည့်ဖဲခန်းကိုပေးရမညျ၎င်း၏အသုံးပြုသူနဲ့အဆင်ပြေမှဝင်ရောက်ခွင့်ဂိမ်းမည်သည့်အချိန်တွင်မ။ မိုဘိုင်းလိုင်းအလုပ်၏အရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း-ကစားခြင်းကနေအမှန်တကယ်ငွေသို့မဟုတ်ခြွင်းချက်ချစ်ပ်ကို၏ဖြစ်နိုင်ခြေအောင်သိုက်နှင့်လည္ေ။ ကျောက်ပြား ပုံမှန်တက်ကြွစွာကစားမှာကွဲပြားခြားနားသောကန့်သတ်။ ဖဲအခန်းသည်အခြားဖဲခန္းမ်ား၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသွားအလာ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တွင်၊၁၊၅၀၀ လူကစားမှာငွေစာရင်းဇယားများ၊နှင့်အထွတ်အထိပ်အကြိမ်အရေအတွက်၏ကစားသမားထက်ကျော်လွန် ၂၊၄၀၀။ ငွေသားနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောကန့်သတ်နှင့်အတော်အတန်ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးများ၏ကမ်းအတွက်ရရှိနိုင်သောဧည့်ခန်း။ သင်စတင်နိုင်ပါသည်၊ဂိမ်းနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှု$၀။၀၁ $၀။၀၂၊ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ဂိမ်းများအတွက်အခန်းနှင့်အတူကစားဝန်ဆောင်$၂၀၀ ၄၀၀$။ အတွက်ကွဲပြားခြားနားသူတို့ရဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ:သင်တွေ့လိမ့်မည်အပျက်သော၊ပြန်အမ်း၊ခေါက်ထွက်ဆုလာဘ်အဖြစ်ဂြိုဟ်တုမှပြိုင်ပွဲနှင့်အတူအဆင့်။ အဖြစ်အများအတွက်ဝယ်-၊ပြိုင်ပွဲမှစတင်$၀။၂၂ အတွက်ရရှိနိုင်၊နှင့်အမြင့်ဆုံးအလှူရောက်ရှိနိုင်$၂၅၊၀၀၀ အတွက်ကြီးမားသောစီးရီး။ ကမ်းလှမ်းထူးနေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်အတူကစားသမားများအသေးစား ၊အဖြစ်ပရိတ်သတ်များ၏မြင့်မားသောလောင်းကြေးဂိမ္း:ငင်-အ-တာဘိုထိုင် သြားပြိုင်ပွဲစည်းသုံးကစားသမားတွေ။ အားလုံးကစားသမားအခွင့်အလမ်းရှိသည်အနိုင်ရ$၁၊၀၀၀၊၀၀၀ ထီသာအကြုံတိုးပွား ၂ မှ ၂၄၀၊၀၀၀။ အဆိုပါဆုရှင်ယူ ၁ သန်း၊ဒုတိယနှင့်တတိယနေရာရလိမ့်မည်$၁၀၀၊၀၀၀ အသီးအသီး။ သောတရားစွဲဆိုစီအိုးဆွဲ။ ပမာဏကိုကော်မရှင်အပေါ်မူတည်ကစားကန့်သတ်အရေအတွက်ဖဲချပ်ကစားသမားတွေမှာစားပွဲ၊ဒါပေမယ့်ထက်မပိုပါဘူးအထားဆံုး။ သာပြိုင်ပွဲကြီးများ၊ထွန်ပေးရသည်မှအသီးအသီးဝယ်-သာ။ ၎င်း၏တန်ဖိုးကိုထံမှကွဲပြားခြားနား ၀ အထိ ၂၀ ။ ကိစ္စအများစုအတွက်၊ဖဲကစားသမားပေးဆောင်ထက်မပိုသော၉
ထွန်ပေါ်အသီးအသီးမှအလှူခြင်းပြိုင်ပွဲ။ အောင်တစ်သိုက်အပေါ် မခက်ခဲသည်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖဲခန်းကိုထောက်ခံအားလုံးနီးပါးလူကြိုက်များ။ အနိမ့်ဆုံးသိုက်ပမာဏမှာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်$၁၀၊နှင့်အမြင့်ဆုံးအသိုက်ပမာဏပေါ်မူတည်ရွေးချယ်သောနည်းလမ်း။ ရုပ်သိမ်းရေး၏ရန်ပုံငွေမှ များသောအားဖြင့်ရာအရပ်ကိုကြာအတွက်နာရီအနည်းငယ်။ အစောင့်ဆိုင်းနေအချိန်အတွက်ပိုက်ဆံအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန်အကောင့်များသောအားဖြင့်အပေါ်မူတည်သည်ရွေးချယ်ထားသောငွေပေးချေမှုစနစ်။ ရုပ်သိမ်းရေးန့်သတ်ပေါ်မူတည်ရွေးချယ်ထားသောငွေပေးချေမှုစနစ်။ ကိစ္စအများစုအတွက်အမြင့်ဆုံးအ ပမာဏခန့်ဖြစ်ပါသည်$၅၀၊၀၀၀အချိန်၊ဒါပေမယ့်သင်အသုံးပြုလျှင်အဘဏ်ကိုလွှဲပြောင်း၊တိုးမြှင့်နိုင်ရန်တစ်သန်းဒေါ်လာ။ ပါကကစားသမားကိုအတော်ကြာရပ်နားရန်တောင်းဆိုမှုများတစ်ဦးတိကျတဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်အတွင်းနေ့၊အားလုံးတောင်းဆိုမှုများကိုပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုတည်းငွေပေးချေမှု။ အကယ္ဖဲအခန်းအမေးများအတွက်အပိုဆောင်းအတည္ျစာရွက်စာတမ်းများရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါငွေသားထွက် သို့သော်၊အစဉ်ကာလအတွင်းအတည်ပြုကာလအဖြစ်ပြန်လာဖို့အဆိုပါကစားသမားရဲ့အကောင့်ကိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကစားသောဖဲချပ်။ အသံုးျပဳသူမ်ားနိုင်ပါလိမ့်မည်ဒါင္းဖဲခန်းလိုင်းမှတ်ပုံတင်ရန်အကောင့်တစ်ခုအတွက်မှန်ကန်ပိုက်ဆံထွက်ရှာ၊သတင်းအချက်ကလက်ရှိပရိုမိုးရှင်း၊ထွက်ကြိုးစားအတွက်ဂိမ်း၏အခြားထုတ်ကုန်များကုမ္ပဏီနိုလောင်းကစားရုံ၊ေလာင္္းကစားနှင့်အဖြေကိုရှာဖွေအားလုံးသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကို။ ဖဲအခန်းသည်ပိုမိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်၎င်း၏အသုံးပြုသူများ၊ဒါကြောင့်ကမ်းလှမ်းစိတ်ဝင်စားစရာရာထူးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအရင်ကဆိုရင်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတွေ:အသီးအသီးကစားသမား၏အခန်းဖြစ်လာမှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်၊အရာပေးသည်နေဖြင့် ၂၀ မှ ၄၀ အထွန်ပြန်လာတိုင်းအပတ်က။ ကစား$၅ ထိုင်နှင့်သွားသောထီပေါက်နိုင်အနိုင်ရအဆိုပါထိပ်တန်းဆု$၁၊၀၀၀၊၀၀၀၊ဒုတိယနှင့်တတိယနေရာမည်အသီးအသီးရ$၁၀၀၊၀၀၀။ ၁၆ နှင့်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ကိုင် ထိပ်တန်းနှင့်အတူတစ်ဦးစုစုပေါင်းဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်$၁၊၀၀၀၊၀၀၀ တစ်လလျှင်$၂၅၀၊၀၀၀ အပတ်စဉ်ထုတ်၊ကနေစတင်ပြီးဇွန်လ ၁၅၊၂၀၂၀၊အသစ်ကစားသမားကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်$၃၀ အပေါ်ဆုကြေးငွေပါဖဲချပ်။ ရ$၃၀ႏွဂိမ်း ဒီလိုဆုကြေးငွေအ ၊ကိုယ့်တစ်ဦးစံဆုတ်ခွာနာရီပေါင်းများစွာကြာ။ ပထမအသံုးျပဳသူမ်ားခါႏွကြာကြာယူစေခြင်းငှါ။ ပိုမိုသင်ယူ:အမှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့ စံတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်မကွာခြားဖဲချပ်။ မှတ်ပုံတင်မှ ၊အဆိုပါပေါ်တွင်နှိပ်ပါလင့်တွင်တည်ရှိသည်သောအခန်း။ ဤအမှု၌၊သင်ပထမဦးဆုံးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဆော့ဗ်ဝဲထောက်ခံမှု။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုးစား အပ္သည္၊ပြန်လည်အင်တာနက်ကို၊သို့မဟုတ်ပိတ်ပင်ထားမှုကိုအ။ လည်းအာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းဒီလိုလုပ်ဖို့၊ဂိမ်းပိုက်ဆံအပိုင်း။ စစ်ဆေးသင့်ရဲ့အခမဲ့ချစ်ပ်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်စတင်ကစားအခမဲ့ဂိမ်း၏။ အတည်ပြုရန်သင်အသုံးပြုနေတဲ့သော ၊သင်ပို့ရန်လိုအပ်သည်၏ဓါတ္ပံုသင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ပိုက္ဆံျလိပ်စာ။ သင်ဖတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးဟုတ်ကဲ့၊ဖဲအခန်းတစ်ခုရှိပါတယ်-ရုရှဘာသာစကားအထောက်အပံ့ဝန်ဆောင်မှု။ သင်သူမ၏ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖြစ်စေအတွက်အွန်လိုင်းချက်တင်အပေါ်၊သို့မဟုတ်ဆိုက်လိပ်စာမှာ။ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ရေးထောက်ပံ့ဖို့နှစ်ကြိမ်၊ဒါပေမဲ့မလာခဲ့ဘူးတဲ့။ အပေါ် ၂၈။၁၁။၂၀၊ဘဏ်ကဒ်ပြားခဲ့ပါသည္။ ငါကစားမှာမိုက်ခရိုကန့်သတ်၊၇၇၊မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုအသုံးပြုနေဒီကဒ်အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ပြီးဆုတ္ခြာခဲ့သည္။ ငါအခွင့်မပေးပါနဲ့၊မည်သည့်ဖောက်။ ရှင်းပြပေးပါဦးဘာကြောင့်ဆုတ်ခွာကဒ်ခဲ့သည်။ နိုင်ဒေတာရိုက်ထည့်မှက ။ငါရွေးချယ်.
မရှိသောကြောင့် ။ ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုသင်ကြိုက်လျှင်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ဖို့အများကြီးပါတယ်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပိုဆု။ အေးမြထွန်သာအရာျဖစ္သည္။ ဒါပေမယ့်များကင်းမဲ့မှုကြောင့်အ ဖြစ်လာ၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲခြေရာခံဖို့ပြရန်နှင့် ။ ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုကြောင်းအထောက်အပံ့အခန်း ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ကိုဤကိစ္စ။ အခန်း၏သဘောထားမှဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်း။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုအတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့ပြီ။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သတင်းအချက်အကြောင်းအရာဂိမ်း၏။ ရိုးရှင်းသောအသက်ခန်း၊စျေးပေါနှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်။ ဒါဟာရဲ့အနားအစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြ။ အတြက္ဝန္ထမ္းမလွန်ကောင်းစွာလုပ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအရာကမဆိုး။ မူအရခုနှစ်၊အဘယ်သူမျှမလိုအပ်စတင်ဖို့၊ဒါပေမယ့်ကြိုးစားခဲ့ကြသူတို့လိမ့်မည်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါ။ က်ေနာ္၏။ အလြမ္းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့! အကြောင်းစဉ်းစားပါအဘယ်ကြောင့် ဖဲခန္းမ်ားက္ေပိတ်ဆို့ဖို့လက်လှမ်းအလက်နည်း၊အောက်လာ ၏တိုက်ပွဲများဆိုးဆိုးပုံမှန်! ကျွန်တော်ရေးမနှစ်မြို့ဖွယ်စကားများအထောက်အပံ့ဝန်ဆောင်မှုမပါဘဲ နှင့်သယံဇာတရင်းမြစ်ကနေဒါပိတ္ထားေသာငါ့အအကောင့်ကို ၆ လအတွက်နောက်ဆုံးတယောက်အကောင့်အစစ်သည်အရာအားလုံးကိုအပေါ်တစ်ဦးစိတ်ခံစားမှုပြိုကွဲပန်ဒါပေမယ့်အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘဲအကူအညီအလွန်ဝမ်း မကောင်းတစ်ဦးလောင်းကစားကုမ္ပဏီနှင့်မပေးပါဘူးလောင်းကစားဆောင်မှုများကို၎င်း၏ဧည့်သည်များ။ အကူအဘို့အလက်ဆက်သွယ်ပေးပါ။ မကစားတိုက်ရိုက်ဒီအခန်းအတွက်။ ရနိုင်ဖို့အတွက်အမြင့်ဆုံး ၊စဉ်ဆက်မပြတ်အထောက်အပံ့နှင့်ကစားအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကလပ်အသင်း၊သင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရေး!.
အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သောအရပ်မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ငါးကတ်များ၏တူညီဝတ်စုံ။ သင့်ရဲ့သင့္ေတာ္ေသာကဒ္မ်ားတိုးမြှင့်တစ်တန်းအတွက်မရှိရင်ငတ်မဆိုပေးထားသောအချိန်မှာ၊ မရှိလျှင်ဖစ္ပ်က္ခဲ့ထက်အခြား၊ကေ၊မေး၊ဂျေ၊တီ၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤပေါင်းစပ်ဟုခေါ်သည်ဖြောင့်ဆေးကြော။ လျှင်သင်၏မျက်စိမြင်၊ကေ၊မေး၊ဂျေ၊တီ၏တူညီသောဝတ်စုံကို-မတန္ဘူး၊ဒီနဂါး-တော်ဝင်ဆေးကြော။ မပြည့်စုံတဲ့ရှင်းလင်းလေးကိုက်ကတ်ဟုခေါ်သည်တစ်ခုဆွဲဆွဲ၊နှင့်အရပ်ဆွဲနိုင်မှသာဖြစ်ပေါ်အေျခညႇပ္ဖိသို့မဟုတ်လှည့်မရှိသောကြောင့်စောင့်ဆိုင်း။ အမြစ်၊ဒီအမရှိတော့ပါတစ်ခုဆွဲဆွဲ၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးလွဲချော်ဆွဲ။ ရှိပါတယ်လျှင်ကိုသာသုံးသင့္ေတာ္ေသာကတ်များအပါအဝင်၊သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကတ်များနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကဒ်များ၊ဒီဗိုင်းရပ်ကိုဆွဲ။ ကိုဆေးကြောခြင်းပေါင်းစပ်အတွက်ဖဲချပ်သည်သိသာကွဲပြားခြားနားသောအနေဖြင့်အခြားပေါင်းစပ်သောရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရုပ်ပုံ။ တစ်ခုဆွဲဆွဲဆောင်မှုကြည့်ကိုသာအာရုံအားလုံးပြီးနောက်၊ငါးကတ်များ၏တူညီဝတ်စုံအဆင်းလှ၊ဒါပေမယ့်လည်းအမြင်မှသည်အခွန်–ပြီးနောက်အပေါင်းတို့၊သည်ငါးအများစုဟာအစွမ်းထက်ပေါင်းစပ်သာ။ နှင့်ဤအရပ် ကစားသမားပေးခြင်း၊မှားယွင်းယုံကြည်နိုင်ရှုံးနိမ့်ခြင်းကိုမရ။ ည့္ရေမွန္မွန္အကျွန်ုပ်တို့၏ဂန္ထဝင်"ဂေါ်ပြား၏ဘုရင်မ"။ အဓိကဇာတ်ကောင်များ၏ဇာတ်လမ်းအလိုက်ငွေအပေါ်အသုံးဦး၏ပထမဦးဆုံးကတ်၊နိုင်ပေး–နှင့်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသူတို့အသုံးများမှာ။ အဆိုပါကတ်များကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်။ သူကနည်းအပေါ်ဒုတိယမြောက်၊နှင့်လည်းအနိုင်ရ။ ဒီလဒ္ကသူ၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်အပြီးသတ်အောင်ပွဲ။ ထို့နောက်သူသည်နည်းတွင်တတိယကဒ်နှင့်အရှုံး။ နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သူမရှိ၊အဟီးရူးသွားတယ်။ သူ၏အပြုအမူသည်ရန်ဘယ်လိုအချို့အဖဲကစားသမားတွေ၊မေ့လျော့ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေရတဲ့၏တစ်ဦးပေါင်းစပ်၊ယုံကြည်သောသူတို့ရှိသည်သင့္ေတာ္ေသာကဒ္မ်ား၊သူတို့ချက်အရရှင်းလင်း-နှင့်အစိတ်ထားအထိေျခညႇပ္ဖိ။ သို့သော်၊ဖြစ်နိုင်ခြေများကောက်ခံအရပ်ကို-အထူးသဖြင့်နှိုင်းယှဉ်နှင့်အတူအခြားပေါင်းစပ်-မြင့်လွန်းမများ၊အထူးသဖြင့်အစားများတစ်ကုန်းပတ် ၅၂ ကတ်များ၊အသီးအသီးကိုက်ညီ၏ပါဝင်ပါသည် ၁၃ ကတ်များ၂
မှ ။ ဒါကြောင့်၊အများအတွက်လူတစ်ဦးနှင့်အတူကိုက်ညီကတ်များအတွက်မိမိတို့လက်ဖို့ကအရေး အကဲဖြတ်၏အခွင့်အလမ်းသူတို့လက်မှအနိုင်ရဖို့မသကဲ့သို့၊အလုပ်မှန်ကန်အပြုအမူ။ ဖွင့်ကိုယူကြကုန်၏အတော်လေးနည်းနည်းသီအိုရီများ–အရေအတွက်ထူးခြားတဲ့ပေါင်းစပ်နှင့် ၅ ကတ်များအတွက် ၅၂-ကဒ်ကၤန္အ ၂၊၅၉၈၊၉၆၀။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေများအသီးအသီး၏ထူးခြားသောပေါင်းစပ်ထွက်ကျသွားဖြစ်ပါသည် ၁ ၂၊၅၉၈၊၉၆၀ သို့မဟုတ် ၁ေ၂၊၅၉၈၊၉၆၀။ ဆိုရင်ပြိုကွဲ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုစီ၏တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် လက်ထဲကကျသွား၊အကောင့်သို့ယူအများအရေအဖြစ်နိုင်ပေါင်းစပ်အတွက် ၅၂-ကဒ်ကၤန္၊ဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုမည်:ဖစ္တန္စြမ္းရန်ကူညီဖို့ဘယ်လိုနားလည်အောင်ရှင်းလင်းသာ–ဒါကဖြစ်ပါသည်၊တစ်ဦးပေါင်းစပ်အပေါ်မူတည်ပြီးစတင်။ ဒါကြောင့်၊အဆိုအရဖြစ်နိုင်ခြေဇယားတစ်ခုဆွဲစည်းချက်ငါးပေါင်းစပ်နှင့်အရှုံးလေးပို။ ဤအရပ်၌အစဉ်ရှိလိမ့်မည်အားလုံးမြင့်မားကတ်၊အားလုံး၊နှစ်လုံး၊အစုံနှင့်ဖြောင့်။ ထိုတစ်ချိန်တည်းမှာ၊သူအရှုံးအပြည့်အဝအိမ်တော်၊ရင်ပြင်၊ဖြောင့်ဆွဲပြီးတော်ဝင်ဆေးကြော။ ၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဖဲချပ်ကစားခြင်းအတွက်အတူလက်သင်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနိုင်နှစ်ခုတခါတရံပို။။ ဒီအခြေအနေ၊ဒါကြောင့်ချက်ချင်းရှင်းလင်းဘယ်သူရပ်မည်နှင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊တစျသင်၏ကတ်များကစားအဖြစ်အမြင့်ဆုံး–အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊အကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကိုဆုံးဖြတ်ရန်များက်ကိုဆေးကြော။ နားလည်ရန်နှစ်ခု၏အရာလက်ရှိအမြင့်ဆုံးအရပ်၊အခြားအချက်ဖြစ်သင့်ကတ်များ၏ပိုကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက်ရှင်းလင်း–သူတို့ကဆုံးဖြတ်ရန်အများက်၏တစ်ခုလုံးကိုရှင်းလင်း။ ဥပမာအားဖြင့်:ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် ၅၂၆၆၅၂၆၆၅၂၂၆၆၅ ၂၆၆၀၂၆၆၆ ကစားသမားတွေနှင့်အတူလက် ၂၆၆၅၈၂၆၆၅ နှင့် ၂၆၆၅၇၂၆၆၅ လိမ့်မည်တွေ့ဆုံရန်၊အတူလက် ၂၆၆၅၈၂၆၆၅ အနိုင်ရလိမ့်မည်အလက်ကြောင့်၊အမြင့်ဆုံးအရပ်ကတ်များအပေါ်လိမ့်မည် ၂၆၆၅၂၆၆၅ နေစဉ်ပြိုင်ဘက်ရဲ့လက်သည်သာ ၂၆၆၅၆၆၅။ ဒါကြောင့်အနီးကပ်အာရုံစိုက်ဖို့ဘယ်လိုသင်၏လက်ကိုသင်ရှိပါကအရပ်၊အထူးသဖြင့်သင်ငွီးေျခညွပ္ဖိနပ္အတူအိတ်ကပ်ဂျီအကြောင်းကတ်များများမှာထက်မပိုတစ်ဆယ်၊သို့မဟုတ်အပေါ်လှည့်သောအခါတစ်ခုလုံးကိုဘုတ်အတွက်တူညီဝတ်စုံ။ သင်ရနိုင်စိုးနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအခွင့်ဖြစ်ခြင်း၏တိုးမြှင့်ဆန့်ကျင်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းအဆင်သင့်ဆေးကြော။ ဒီဆိုက်ကပိုင်ဆိုင်သောမအားဖြင့် ၈၈၈ ပိုင်၊ဒါပေမယ့်အတွက်အချက်အလက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ပေးပါ။ ဆိုက်မကြီးဖန်တီးဖို့လူအားပေးဖို့ဖဲချပ်ကစားရန်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးစည်းရုံးရေးမှူး၏ဂိမ်းများ၊အင်တာနက်ပေါ်မှာကြော်ငြာလောင်းကစား။ဤအရင်းအမြစ်ကိုသာအပေးအချက်အလက်၊ဒါပေမယ့်အတိအကျအကြောင်းဖော်ပြချက်မြှင့်တင်ရေးနှင့်ဆုကြေးငွေတွေ့ရှိနိုင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။ အားလုံးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အပေါ်ဒီဇိုင်းဆိုက်အဖြစ်မှဘာသာရပ်နှင့်မူပိုင်ခွင့်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ကိုးကားနှင့်အချက်အလက်ဆိုက်ကနေ ခွင့်သာသည့်အခါတက်ကြွစွာချိတ်ဆက်ထား။ အကြောင်းအရာများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်အရွယ်ရောက်ပြီးအသုံးပြုသူများသာ။.
အပြည့်အဝတိမျးစောဖဲချပ်အွန်လိုင်းနောက်ဆက်တွဲ၊နိုနဲ့ကဒ်ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ထုတ်ဝေသောတုံလူမှုရေးစီမံကိန်းကန့်သတ်။ ဒါဟာတစ်ဦးစွဲလမ်းကစားရန်အခမဲ့ဗီဒီယိုဖဲချပ်ဂိမ်းအကြောင်းကမ်းလှမ်းစစ်မှန်သော-အချိန်ဂိမ်းနှင့်ခွင့်ပြုကစားသမားဆန့်ကျင်ကစားရန်သန်းပေါင်းများစွာကမ္ဘာအဝှမ်းကစားသမားတွေ။ အဆိုပါဂိမ်းဂိမ်း၏တူညီသည်ကား၊နေအသုံးပွုနိုငျသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအကတ်များနှင့်သက်သေပြအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံး။ အပြည့်အဝတိမျးစောဖဲလည်းပါဝင်သည်အခြေခံအဖြစ်အများအပြားအောင်မြင်မှုများ၊အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး၏ဖဲချပ်ဂိမ်း၊အမျိုးမျိုးသောပြိုင်ပွဲ၊နေ့စဉ်ဆုလာဘ်နှင့်အများကြီးပို။ ဂိမ်းအလွန်ကြီးစွာသောစက်၊စွဲလမ်းဂိမ်းကစားခြင်း၊နှင့်ကြီးစွာသောအမြင်အာရုံအသေးစိတ်။ ကြိုးစား၊သင်ဧကန်အမှန်ပျော်မွေ့။
ဘယ်လို ကိုစုစည်းဖဲချပ်။ သူမည်သူမဆိုမမူကစားဖဲချပ်၏ဖဲလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူ။ အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေကဒီမှာ–ကိုယ့်အယူအဖဲသင်ခန်းစာနှင့်မှတ်မိအပေါင်းတို့သည်ကဒ်ပေါင်းစပ်မှုနှင့်စည်းကမ်းဂိမ်း၏။ သင်လေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်အကြောင်းကိုပိုမိုအစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်းအမှန်တကယ်ဂိမ်းအတွက်အသင့်ရဲ့ဖဲချပ်။ ထို့အပြင်၊သင်ဒေါင်းလုပ်ဖဲဆော့ဖ်ဝဲကိုအခမဲ့။ သင့်အွန်လိုင်းဖဲချပ်လ့က်မည်မဟုတ်ကန့်သတ်ရုံမှသင်ယူခြင်း၏စည်းမျဉ်းများ။ သင်သိနိုင်ရန်လိုအပ်အများကြီးအမှုအရာ။ သင်စုစည်းနိုင်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းနည်းလမ်းများစွာအတွက်၊သင်ရုံလိုအပ်ရွေးချယ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံး။ တချို့ကစားသမားတွေအတွက်၊ဒီတစ်ခုသင်ကြားပို့ချဗီဒီယိုဖဲချပ်ပေါ်နေစဉ်၊အခြားကစားသမားတွေအနေနဲ့ပို့ချဖဲချပ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်စရာများအတွက်လေ့လာနေသည်ဗီဒီယိုဖဲချပ်။ သို့သော်ဤသည်ကိုမကြာခဏတစ်ပေးဆောင်၊အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ကျနော်တို့အကြောင်းစကားပြောနေကြသည်အဆင့်မြင့်သင်တန်း။ သော်လည်းသင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဖဲသင်တန်းအခမဲ့အဘို့အ–သင်ရုံရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒေါင်းလုဒ်ဖဲသင်တန်းစာအုပ်များ။ ရှိပါတယ်ဖဲလေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများဖန်ဆင်း၏ပုံစံအတွက်အစီအစဉ်များ။ များသောအားဖြင့်အစီအစဉ် သင်ခန်းစာများဖြင့်အဆိုပါမီးေပါတယ္။ ဤအစီအစဉ်သင်ကူညီလိမ့်မည်မြင်စွာဖြည့်စွက်သင့်ရဲ့အခမဲ့ဖဲချပ်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်၊သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဖဲချပ်အတွက်လေ့ကျင့်ရေးသောဗားရှင်းပိုပြီးအဆင်ပြေများအတွက်။ ရှိလိမ့်မည်ကျိန်းသေလိမ့်မည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုအဘို့အအဆငျ။ ဖဲလေ့လာမှုလွယ်ကူများမှာ။ ရလဒ်ကောင်းမယ်ဝင်ငွေနဲ့ပျော်စရာဂိမ်းဖြစ်စေသောကျေနပ်မှု။
မှနောက်ဆုံးရသတင်းများ ၈၈၈ ဖဲချပ်
အဆိုပါလူကြိုက်အဖဲခန်း ၈၈၈ ဖဲချပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့ကြေညာချက်များအကြောင်း သူတို့ဆက္စပ္ေနသည့္အဝင်ဂြိုဟ်တုမှအ ၊ ၂၀ ထောင်ဒေါ်လာငွေနှင့်အတူရိုးရှင်းမစ်ရှင်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ရတဲ့အပေါ်လွန်ချစ် ။ သင်ရိုက်ထည့်သောစစ်ပွဲဂိမ်းများများအတွက် ၂၀၁၉ အဘို့အရုံမျှရာခိုင်နှုန်း။ ၏သင်တန်း၊အသုံးပြုသူများနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောအရာင္းရန္-သာရှိသည်တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာအခွင့်အနိုင်ရတဲ့လက်မှတ်၊ဒါပေမယ့်သီအိုရီအဖြစ်နိုင်။ ဒါဟာသတိပြုဖို့အရေးကြီးကြောင်းဒီမှာ ၈၈၈ ဖဲပူးေပါင္း အတွက်ငါးနှစ်ဆက်တိုက်နှစ်၊နှင့်ဤတစ်ခြွင်းချက်အတိုးေရာ၊အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်းအွန်လိုင်းဂြိုဟ်တုမှပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှသာမှာကျင်းပအင်္ဂုတ္တဖဲချပ်။ အဓိကအအဖြစ်အပျက်ကျင်းပလိမ့်မည်၊ဇူလိုင်လကနေ ၃-ဇူလိုင္လ ၁၆၊ကစားသမားတွေရှိလိမ့်မည်သုံးစတင်ကာလေယာဉ်တစ်စု၏၆၀ ထောင်ချစ်ပ်။ ပထမဦးဆုံးအချိန်၏သမိုင်းအ ၊ပြိုင်ပွဲအမည်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းအတွက်"ကြီးမားကာ"။၏သင်တန်း၊ကစားသမားတွေလည်းရွေးချယ်အခြားဂြိုဟ်သောကုန်ကျမည်တစ်ခုထက်ပို။ရာခိုင်နှုန်း၊ထိုသို့အားဖြင့်တိုးမြှင့်အခွင့်အလမ်းတွေလက်မှတ်များအပြင်၊အဓိကအအကြိုက်ဆုံး၏နောက်ဆုံးအဂြိုဟ်တုယူလိမ့်မည်အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူသူများ။
နှင့် ၈၈၈ ဖဲချပ်။ နေ့တိုင်းအသုံးပြုသူများဝင်ရောက်ဖို့သူတို့ရဲ့ဂိမ်းလိုင်းနှင့်အလုပ်ခြင်းများ၊ဒီမှာရနိုင်ပြိုင်ပွဲလက်မှတ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်း:$၅။၅$၃၃။ အများအပြားကစားသမားတွေပြောနိုင်ကယ့်ကိုအကောင်းရရန်ဆုပါ။ အထိပဉ္စဖေဖော်ဝါခွဲခြား၊ကစားသမားတွေအယူအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအတွက် ၊ကျင်းပကြသည်။ အခုပထမဆုံးစတင်မှာ ၁၅:၀၀၊ခြင်းနှင့်ဒုတိယတစျခုမှာ ၂၁:၀၀ မော်စ။ သို့သော်၊သာအပ္ႏပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဤမြှင့်တင်ရေး။ လက်မှတ်တွေကို တန်ဖိုးရှိသုံးထောင်ဒေါ်လာငွေအနိုင်ရရှိခဲ့နိုင်သာတဲ့အထူးဘီး၊ခွင့်ပြုရန် ၂ ကြိမ်နေ့၊နှင့်ဒုတိယအကြိမ်နိုင်တင္တယ္ဗ်ာအတွက်သာတရားဝင်အက္ပ္ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများများအတွက်။ တစ်ဦးရရှိရန်$၂၀၊၀၀၀ လက္မွတ္၊သင်ရုံလိုအပ်ဖြည့်စွက်၏တဦးတည်းအောက်ပါမစ်ရှင်:.
သင်ရောင်းရ။ အချို့သောအင်္ဂါစနစ်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်။ ယခုစႏိုင္သည္လိမ္ျအားလုံးကိုအသုံးျပဳႏိုင္မည္။ မင်္ဂလာပါလူတိုင်းဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါစေအပေါ်ပိုက်ဆံဖဲချပ်မတိုင်ခင်ကကျွန်မကစားပျော်စရာအဘို့သက်သက်သာနှင့်အတူဘီယာကစားဖြင့်မှာသုညဒီတော့တယောက်မေးကြဘူးသောသူတို့အဘို့၊ဤအရာမှတာ့ကိုအောင်စတင်ပေါ်ပိုက်ဆံဖဲချပ်? ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားစာဖတ်နေစဉ်အလေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများ၊ဒါပေမယ့်နေဆဲအရာအားလုံးထွက်အလုပ်လုပ်အတွက်အလေ့အကျင့်ဖို့ကြိုးစားပစ် ၁၀ ကောင်နှင့်ကစားသည်။ ၇ သောသူယောက်ျားတွေဝင်ငွေအားဖြင့်ပိုက်ဆံဖဲချပ်ကစားခြင်းအတွက်ဂစ်တာ။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့် ၊၊မဖြစ်သို့မဟုတ်သူတို့ထိုင် ထိုအိမ်သည်ဆိတ်ငြိမ်အောင်ပိုက်ဆံ၊နှင့်အဓိကပါတီ သိရပါဘူး။ ရှိနေသောသူယောက်ျားတွေသွားဖို့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲ၊ဗ်၊သည္ဆိုက္ပရက္စ္၊နှင့်ရှိကြ၏လည်းကောင်းအချင်းချင်းအထက္ ၁၀။ ငါတို့သည်လည်းအမှန်တကယ်ငါးမန်း၊ငါမူကားမည်မဟုတ်ကြော်ငြာကဒီမှာ၊ဒါကြောင့်ရှိပါတယ်ဥပမာများနှင့်မည်သူမဆိုထံမှသင်ယူ၊ဒါပေမယ့်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်လုပ်ဖို့သည္ထိုအခါသင်သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအစီလမ်းကြောင်းကို။ သင်ကြိုးစားရှာဖွေဖို့အပတ်အ ၊ငါမူကားမသိရပါဘူးလျှင်ဤသည်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူး။ သို့သော်ကွန်ယက်အခုတော့အပြည့်အဝဗီဒီယိုများ၊စာအုပ်များနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုဂိမ်းတိုးတက်လာဖို့အများ။ သင်ချက်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ကောင်းဖဲဖိုရမ်နှင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများ၏ရနှင့်အခြားအမှုအရာ။ လျှင်သင်ပြောတတ်ပါတယ်၊ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားဤအအေးဆုံးအရင်းအမြစ်များ၊ဒါပေမယ့်သာမြားသညျမ၊လျှင်မ၊သို့ဖြစ်လျှင်သင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်၊သင်အနိုင်ပေးနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့ဝင်ငွေ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊သငျသညျတွေ့ဆုံရန်အဆိုပါကစားသမားအသက်ရှင်ပြီးသူတို့ကိုမေးသောမေးခွန်းများ။ ကောင်းကစားသမားတွေအမြဲပျော်ရွှင်စေဖို့အကြံပြုချက်များပေး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊အပေါငျးတို့သကလပ်အဖွင့်၊ဒါကြောင့်လိမ့်မည်အခွင့်အလမ်း။ ၊တစ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဌလုပ္ငါကစား၊စတုတ္ထအတွက်တည်ငြိမ်တဲ့အပေါင်း၊ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုလည်းညှစ်ခဲ့ပြီ၊နှစ်ဦးမှသုည၊ယခုငါဝင်ငွေအနည်းငယ်၊ဒီအလုပ္လိမ့်မည်၂၀၀၊ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုဝင်ငွေကြီးထွားလာ၊နှင့်အရာအားလုံးထွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ရဖို့အသုံးပြုသွားဖတ် ကိုင် ၂ ပမာဏငွေသားအပေါ် ၁ ပမာဏအွန်လိုင်းဖဲချပ်စူပါစာအုပ် ဗီဒီယိုအားဖြင့်တွေ့ရ လမ်းဖြင့်၊ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်မကစား ၁-၂၊အများအားဖြင့် ၁၊ငါနှင့်အတူသဘောတူပုဂ္ဂိုလ်အထက္သောရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ငါစောင့်ရှောက် ၃၀၀ ကြီးဝန်ဆောင်၊တခါတရံတွင်ငါအပေါင်း ၂၀၀၊ဒါပေမဲ့နောက်တော့သူတို့ကအမြဲပြန်လာ။ ပေမဲ့ကျွန်မသွားတက်မှ ၂ မူကား၊ ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်အဘို့ပိုက်ဆံဝင်ငွေအွန်လိုင်းလျှင်၊သင်အမှန်တကယ်ငွေရှာဖို့၊အဖြေကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးရိုးသားသားမေးခွန်းအတွက်-သင်အပျော်အပါးခံစားတဲ့အခါသင်အနိုင်ရအတွက်ငွေသား? သင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုနေမှာဖဲချပ်ဇယား၊လိုဂိမ်းဖွင့်ဖို့ချက်ချင်း၊အဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယျသို့ဖြစ်ပျက်? သင်ပြုဘယ်လောက်ဆိုးရသည့်အခါသူတို့ပြောင်းရွှေ့သင်? သင်စဉ်းစားသင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ချစ်ပ်နှင့် ၊ပင်လျှင်သိသာကစားညံ့ဖျင်း? တကယ်တော့၊သင်ငွေငွေသား၊ သင့်ဆက်ဆံဒီအဖြစ်အပြီးတစ်ဦးငြီးငွေ့ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာအလုပ်သင်လိုအပ်မှသွားပြီးအနားယူယူမှချွင်းချက်နှင့်အတူ၊အထူးသဖြင့်မြင့်မားသော ၁၀၀၀။:-အဖြစ်အဘို့ပိုက်ဆံဝင်ငွေအွန်လိုင်းလျှင်၊သင်အမှန်တကယ်ငွေရှာဖို့၊အဖြေကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးရိုးသားသားမေးခွန်းအတွက်-သင်အပျော်အပါးခံစားတဲ့အခါသင်အနိုင်ရအတွက်ငွေသား? သင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုနေမှာဖဲချပ်ဇယား၊လိုဂိမ်းဖွင့်ဖို့ချက်ချင်း၊အဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယျသို့ဖြစ်ပျက်? သင်ပြုဘယ်လောက်ဆိုးရသည့်အခါသူတို့ပြောင်းရွှေ့သင်? သင်စဉ်းစားသင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ချစ်ပ်နှင့် ၊ပင်လျှင်သိသာကစားညံ့ဖျင်း? တကယ်တော့၊သွားနေတယ်ဆိုရင်ငွေသားဝင်ငွေ၊သငျသညျအဖြစ်သင့်အဖြစ်ဆက်ဆံပြီးတစ်ဦးငြီးငွေ့ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာအလုပ်သင်လိုအပ်မှသွားပြီးအနားယူယူမှချွင်းချက်နှင့်အတူ၊အထူးသဖြင့်မြင့်မားသော ၁၀၀၀ ကန့်သတ်ဥပမာအားဖြင့်:-ကောင်းစွာ၊မအတော်လေးဆိုး၊ဒါဟာအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကစား၊ တကယ်ခံစားရလို့အလုပ်၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင် ၦာန္ေ၊ဒါပေမယ့်ဆွဲနှင့်စွဲလမ်း၊တစ်ခုခုရှိဖို့အကြောင်းစကားပြောခန်း၊၏သင်တန်း သင်ဂိမ်းအပေါ်ကြယ်ပွ၊ထိုအခါအမည်အမှတ်အသားပြုချင်မှငွေရှာပိုက်ဆံဖဲချပ်ကစားခြင်းအားဖြင့်? သင်လိုချင်တာအများကြီးအမှုအရာ။ မထင်ကြကလွယ်ရဲ့အစမှာ၊သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊သင့်ရဲ့ဘဝသို့လှည့်လိမ့်မည်အိပ်မက်ဆိုး၊အဆက်မပြတ်စိတ်ဖိစီးမှု၊အာရုံကြောမည်ကွဲအတွက်အကြံအစည်၏ဖဲဖဲချပ်နှင့်သာဖဲချပ်။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်မြင့်မားကောင်းစွာ၊သင်အနိုင်ရလိမ့်မည်တစ်နေရာရာမှာကြား ၁၀၀-၂၀၀ နှစ်ကောင်ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်ကာလ၌၊သင်မူကားလည်းအများကျရောက်ပြီးခက်ခဲ။ပြီးနောက်ညစဉ်ညတိုင်းရဲ့အောင်မြင်၊သင်နံနက်ယံ၌ထနိုးအခဲ့ပြီးပြီကဲ့သို့သင်တို့ပြေးကျော်ဖြင့်လေ့ကျင့်။ နှင့်၊စိတ်ဖိစီးမှု၊စောင်း၊မြစ် စောင်းစောင်းစိတ်ဖိစီးမှုကသင့်အသက်တာ။ အားကစားအဆုံးအထိ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ထားမည်တစ်ခုလုံးကိုင့္အသို့မဟုတ်ငွေစုကတည်းက၊သင်ရိုးရှင်းစွာအသင္း များမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံနှင့်စည်းကမ်း။ ဒါပေမယ့်သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေအားဖြင့်ပိုက်ဆံဖဲချပ်ကစားခြင်း၊ထို့နောက်ပထမဦးဆုံးစတင်ကစားအပေါ်ကိုချစ်ပ်များနှင့်သာပုံသေကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားစုဆောင်း ၁ မိနစ်ခြွင်းချက်ချစ်ပ်၊သာအပေါ်သတ်မှတ်ထား။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးမည်ဒီအရူးအိပ်မက်တောင်မှရှိပြီးသားသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု။. သင်ဝင်ငွေချင်တယ်ပိုက်ဆံဖဲချပ်ကစားခြင်းအားဖြင့်? သင်လိုချင်တာအများကြီးအမှုအရာ။ မထင်ကြဘူးလွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်၊ဒါပေမယ့် အစအဦးမှာသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊သင့်ရဲ့ဘဝသို့လှည့်လိမ့်မည်အိပ်မက်ဆိုး၊အဆက်မပြတ်စိတ်ဖိစီးမှု၊အာရုံကြောမည်ကွဲအတွက်အကြံအစည်၏ဖဲဖဲချပ်နှင့်သာဖဲချပ်။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်မြင့်မားကောင်းစွာ၊သင်အနိုင်ရလိမ့်မည်တစ်နေရာရာမှာကြား ၁၀၀-၂၀၀ နှစ်ကောင်ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်ကာလ၌၊သင်မူကားလည်းအများကျရောက်ပြီးခက်ခဲ။ပြီးနောက်ညစဉ်ညတိုင်းရဲ့အောင်မြင်၊သင်နံနက်ယံ၌ထနိုးအခဲ့ပြီးပြီကဲ့သို့သင်တို့ပြေးကျော်ဖြင့်လေ့ကျင့်။ နှင့်၊စိတ်ဖိစီးမှု၊စောင်း၊မြစ် စောင်းစောင်းစိတ်ဖိစီးမှုကသင့်အသက်တာ။ အားကစားအဆုံးအထိ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ထားမည်တစ်ခုလုံးကိုင့္အသို့မဟုတ်ငွေစုကတည်းက၊သင်ရိုးရှင်းစွာအသင္း များမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံနှင့်စည်းကမ်း။ ဒါပေမယ့်သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေအားဖြင့်ပိုက်ဆံဖဲချပ်ကစားခြင်း၊ထို့နောက်ပထမဦးဆုံးစတင်ကစားအပေါ်ကိုချစ်ပ်များနှင့်သာပုံသေကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားစုဆောင်း ၁ မိနစ်ခြွင်းချက်ချစ်ပ်၊သာအပေါ်သတ်မှတ်ထား။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးမည်ဒီအရူးအိပ်မက်တောင်မှရှိပြီးသားသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု။ အဘယ်အရာကိုမျိုးကို ၊ဘာချစ်ပ်အမျိုးအစား၊အကြှနျုပျတို့သညျသူတို့သင်ယူဖို့၊သင်တို့အဘို့အသေးငယ်တဲ့အမှုအရာ၊သင်ပစ် ၁၀၊ဆုံးရှုံး၊ထိန်းချုပ်။ ထိုပုံသေကန့်သတ်အရှည်သေဆုံး.
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဂိမ်း-တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် ': အတွက်ကတစ်မှတ်သားဖွယ်ဂိမ်းမှအသိထုတ်ဝေသူ ။ အကြံပြုမှတ်ဉာဏ်အမ်ဳိးဖုန်းပေါ်မှာများအတွက်တပ်ဆင်ခအပေါ်မူတည်ကိရိယာ၊ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးဆုံးဖြတ်ရန်အခမဲ့အာကာသအပေါ်ဖုန်းအတွက်တိတ်ဆိတ်သောစစ်ဆင်ရေး၏အအက္ပ္ကို ။ နီးကပ်အာရုံစိုက်ဖို့အတောလုပ်ဗားရှင်း။ လိုအပ်သောဗားရှင်းပေါ်မူတည်၏အမှုကြောင့်ကျေနပ်မြန်မာဘာသာပြဿနာများနှင့်အတူပစ်လွှတ်နေကြသည်။ အဆိုပါဂိမ်းအကြောင်းအင်္ဂါရပ်များ-တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် ဖဲချပ်: လိမ့်မည်အတည်ပြုရေလွ်ာ့စကစားဆိုက်-အရင့်သည်အညွှန်းကိန်းများအပေါ်ပေါ်တယ်၊မှာရပ်တန့် ၁၀၊၀၀၀၊၀၀၀ ၊အများဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကညွှန်ကိုအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာ။ ပထမနေရာအတွက်ဒီဂိမ်းအတွက်အသင့်လျော်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးဂရပ်ဖစ်ခွံ၊နှင့်အတူရေတွင်းတစ်တွင်း-ရွေးချယ်ထားသောအကြံစည်မှုနှင့်အဆင့်မြင့်-အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ရပ်နှင့်ရွှင်လန်းဂီတ၊ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့ထားတဲ့နမူနာကစားစရာ။ ဟက်ကာ-တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် ဖဲချပ်:ေအန္းအုပ်၏ထိုအချိန်က၏အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ခြင်း-အပေါ်မူတည်ကိရိယာသည့်အတွက်အချို့အကျိုးအ။ တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း၏အက္ပ္ကိုမတ်လအပေါ်ပြန်လွတ်လာခဲ့သည် ၁၄၊၂၀၁၈။ ပါလျှင်သင်အဟောင်းဗားရှင်း။ အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု ခံရဖို့ပထမဦးဆုံးအကြားတပ်ဆင်ရန်အသစ်ဂိမ်းများနှင့်အစီအစဉ်ပူဇော်သောအားဖြင့်သုံးစွဲသူများဤဆိုဒ်၏။
အပြည့်အဝတိမျးစောဖဲစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနွေရာသီအတွက် ၂၀၀၄ ဖြင့်ကျော်ကြားဖဲပညာရှင်ရစ်ဖာဂူဆန်နှင့် ။ ဖဲအခန်းလျင်မြန်စွာလူကြိုက်များရရှိခဲ့၊ဒုတိယသာ ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသွားအလာ။ သို့သော်ငြားလည်း၊ထိုလူငယ်အခန်းကို၎င်း၏နယ်ပယ်အတွက်လောင်းကစားလုပ်ငန်း။ အောင်မြင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုတီထွင်ဆန်းသစ်ဖြစ်ပါသည်စိတ်ကူးဆွဲဆောင်ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားအတွက်လဲလှယ်အတွက်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာများ။ အဖဲချပ်ပညာရှင်များထင်ခဲ့သည်ကိုဆွဲဆောင်ရန်သာမန်အသုံးပြုသူများအရာအမှန်ဖြစ်ထွက်လှည့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်။ ဒါဟာတာရှည်ခဲ့ကြောင်းအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ကုမ္ပဏီအဖြား၎င်း၏အသုံးပြုသူများအားဖြင့်အသုံးပြုငွေမှာမိမိတို့အကောင့်အသစ်များ၏မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွား။ အားလုံးအပြည့်အဝတိမျးစောကစားသမားခဲ့ဟုန္ထုိးထွက်ချိန်တည်းမှာ၊ဖဲအခန်းရိုးရှင်းစွာမဟုတ်နိုင်ပါပြီနှင့်တွေ့ဆုံရန်၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများ။ ဒါဟာအနက်ရောင်သောကြာနေ့ပျက်ညတွင်ဧပြီလ၏၁၅-၁၆၊၂၀၁၁ကူညီခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည်ကနေစနစ်တစ်ခုလုံးအတွင်း။ အဖြစ်ထွက်လှည့်ကတည်းက၊၂၀၀၇ေ မှုကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဘဏ္ဍာရေးလိမ်လည်မှု၊အပြည့်အဝတိမျးစောဖဲအမှုဆောင်ခဲ့ကြ $၄၄၀ သန်း။ အခြေခံအားဖြင့်၊ဒီငွေအကြားဖြန့်ဝေကုမ္ပဏီ၏မန်နေဂျာ။ ဖာ တယ်$၃၈ သန်း၊ခရစ်ဖာဂူဆန်-ဒေါ်လာ၂၄သန်း။ ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်သင်တန်းသားများကို"ဌာနခွဲ"၂၉။ ဇွန်လအတွက် ၂၀၁၁၊ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အစီအပြည့်အဝတိမျးစောဖဲချပ်လုံးဝခိုးယူ၏၊ဘာမှမဆပ်ဖို့ကစားသမားတွေနှင့်အတူ၊နှင့်ဖဲချပ်ခန်းခဲ့သည်။ လုံလောက်၊သင်၏အမြင်လက်တွေ့မလုပ်ခဲ့ခွင့်ပြု၊အလျင်အမြန်ရှာဝယ်။ ပမယ့္အရှုပ်တော်၊"အ "အမှတ်တံဆိပ်ခဲ့တယ္။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဝယ်ယူခဲ့သည်အားဖြင့် ။ အရကော၊အသဘောတူညီချက်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုပြီးတစ်ဒေါ်လာဘီလျံ။ နိုဝင်ဘာလအတွက် ၂၀၁၂၊အပြည့်အဝစောင်းကြီးပြန်လည်စတင်နှင့်အတူနီးပါးပြည့်စုံ၏ထိန်းသိမ်းမှုထမ်းများ၊ဒါပေမယ့်မယူရာထူးကကျင်းပမီပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်သို့လှည့်တစ်ဦးတည်းသာ၏အပြိုင်ဘက်များ၏ဌာနခွဲငယ်တစ်ခုစျေးကွက်ဝေစု။ ဇာတ်လမ်းအမှန်တကယ်တုန်လှုပ်ကိုသာအားဖြင့်သတ္တိနှင့်ပွင့်လင်း၏လိမ်လည်မှု၊ဒါပေမယ့်လည်းအားဖြင့်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ရပ်တွေကို အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ခြည် ပန်ထိခိုက်အသုံးပြုသူများသူ၏တီထွင်-တြင္မတ္လ ၆၊၂၀၁၂၊ပြီးနောက်နီးပါးအနှစ်။ပထမဦးဆုံးငွေပေးချေမှုကိုထိခိုက်မေရိကန်ကစားသမားတွေစတင်ပေါ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၇၊၂၀၁၄၊သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်အနက်ရောင်ကိုသောကြာနေ့။ ဒါဟာထွက်လှည့်ကြောင်းအပြည့်အဝတိမျးစောဖဲအသုံးပြုသူများပြောင်းရွှေ့သူတို့၏ပိုက်ဆံများအတွက် ၃ နှစ်အဖြစ်အကျိုးစီးပွားအခမဲ့ချေးငွေ။ အပြည့်အဝတိမျးစောဖဲချပ်သည်အကယ်စင်စစ်အတော်လေးတစ်လျောက်ပတ်သောဖဲချပ်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖဲချပ်ခင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့် စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊အပိုင်ရှင်၏။ ဒီအားနည်းချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သောကြောင့်၊သူတို့ကအတော်လေးအတွက်အောင်မြင်အောင်တစ်ဦးကိုခံထိုက်သောသူပြိုင်ဘက်များအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကြောင့်၊ဒါကြောင့်အကျိုးအကြောင်းအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးအတွေးအခေါ်ပထမဦးဆုံးသွား ၊ပြီးတော့မှအနိမ့်ဦးစားပေးအပြည့်အဝစောင်း။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တွင်၊အပြည့်အဝစောင်းအကဲခတ်များအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံအားဖြင့် ၁၀ ကြိမ်လူထက် ၊နှင့်ဒိုင်းနမစ်၏မကြာသေးမီနှစ်များမဟုတ်နှစ်သိမ့်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့ရာထူးကျင်းပကြသည်အပေါ်အပြည့်အဝစောင်း၊ေရယံု။ လူဂုဏ်၊တရားဝင်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံး အမှုအရာအခြေခံကျကျရေးအတွက်မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းနှစ်ကျော်။ အနက်ရောင်ကိုသောကြာနေ့နမူနာကောင်းတစ်ခု။ သောင်း၏အသုံးပြုသူများအထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆုံးရှုံးသူတို့၏ငွေနေ့ချင်းညချင်း။ ငါအဘို့အစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြငွေပေးချေမှုပါးသည် ၃ နှစ်ပေါင်း။ နှင့်မည်မျှအာရုံကြောခဲ့ကြသည်သုံးစွဲ? ငွေဘယ်လောက်သုံးစွဲခဲ့သည်အပေါ်ဥပဒေကြောင်းအရ?ဘာအကိုင်အဘို့အပြည့်အဝတိမျးစော? ကျွန်တော့အထင်အစဉ်အလားအလာများမှာမရမ်းပြောင်လက်တောက်ပ၊အာမခံအတွက်ပြိုင်ပွဲအဆက်မပြတ်ဖြတ်ခံရ၊နှင့်ရှိပြီးငွေသား။ ပင်အခု ၊၊ ပြိုင်ပွဲရီးဆွဲဆောင်ကစားသမားသာအဆိုပါစီးရီးကိုယ်တိုင်ကနောက်ချက်ချင်းအဆုံးသတ်၊လူတိုင်းနှိပ်ခလုတ်ကိုအတူတကွကြောင့်၊လက်တွေ့ဘာမှပေါ်မှာကစားရန် ၏အပြင်ဘက်။.
စတင္ခဲ့သည္။၂၀၁၁ အ ၈၈၈။ ပြီးနောက် ၅ အနှစ်များ၏တဦးတည်းအတူလုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီကြီး၏စက်မှုလုပ်ငန်း၊ဒါကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်မှအဆုံးအာရှဖဲကွန်ယက် ၊တစ်နှစ်လောက်ပြီးနောက်အလုပ်၏၊ထိုသို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကို၏အခန်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးခဲ့သည်ပရိုဂရမ်တွေရဲ့၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးဖဲရိွအခန္းမ်ား၏သမိုင်းဖဲချပ်–။ ပြီးနောက်သိမ်း၏ နှင့်၎င်းနောက်ပိုင်းပိတ်သိမ်း၊အများဆုံးအဆိုပါပရိုဂရမ်မာ၏စိတ်အပိုင်းဖြစ်လာ၏။ သာ ၊စာရင်းဇယားများစုဆောင်းအစီအစဉ်ပိတ်ပင်ခဲ့ခဲ့သည်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အဆိုထားသောဆော့ဝဲလ်အထွေထွေအတွက်။ ဒါပေမဲ့၊အဆင်ပြေ၊ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအထိမ်းအမှတ်ကစားသမားတွေနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်းနှင့်အရေးမှတ်တမ်းများအပေါ်။ ကြီး၏အစိတ်အပိုင်း ကွန်ယက်အဆင့် ၆ လောက၌အရ၊အရှေ့ထိုသို့သောကွန်ရက်အဖြစ် အနိုင်ရ။ နာရီ၏အမြင့်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာလှဲ ၀၈:၀၀-၁၀:၀၀ စိဖိတ်အချိန်၁၈:၀၀-၂၀:၀၀ မော်အချိန်။ ဤအချိန်တွင်၊အဆိုပါအရေအတွက်၏ကစားသမားမကြာခဏထက်ကျော်လွန် ၂၊၀၀၀။ -ငွေဂိမ်းများနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေမိုက်ခရို-ကန့်သတ်$၀။၀၅ $၀။၁မှမြင့်မားသောလောင်းကြေးအားကစားပြိုင်ပွဲ$၁၀၀ $၂၀၀။ နေသော်လည်းအတော်လေးမြင့်အနိမ့်ကန့်သတ်ရန်၊အနိမ့်ဆုံးရာင္းရန္-သာေ၁၀ ပြဲသာ$၁။ အ ပြိုင်ပွဲဇယားကွက်ခဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အမျိုးမျိုးပြိုင်ပွဲနှင့်အတူ နှင့်အရေအတွက်အနည်းငယ်သာပါဝင်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်။ ေငြဂိမ်းများ၊ထွန်ခဲ့သည်တရားစွဲဆိုပမာဏကိုအတွက်၏၅ ကိုအိုးအားလုံးအပေါ်ကျောက်ပြားကို၊ဒါပေမယ့်ဂိမ်းပေါ်မူတည်။၊၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအရွယ်အစားသတ်မှတ်သည်:$၁ အတွက်$၀။၀၅ $၀။၁၀ ရန်$၁၅ အတွက်ကန့်သတ်$၁၀ $၂၀ နှင့်အဆင့်မြင့်။ ပြိုင်ပွဲတစ္ေနိမ့်ဆုံးကော်မရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ၅ ပါ။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ဆောက်လုပ်ဖို့သင်၏ပြိုင်ပွဲ နှင့်အတူပြိုင်ပွဲငွေဖြင့်အထူးတီ$တာလျှံပြိုင်ပွဲ၊ပါဝင်သည့်အတွက်မဟုတ်ခဲ့ရာထွန်။ ဗီဇာ၊မာစတာ၊ပညာရှင်ကတ်များအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်များ ၊ငင်၊ကုန်သွယ်၊၊ နည်းလမ်းများကို၊သက်သေပြ-နှိပ်ပါ၊၊၂၄၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် ၊၊၊ နှင့်ဘဏ်ငွေလွှဲ။ ငါကငါပေးမည်ဖို့တစ်အချက်ဒီဖဲချပ်ခန်း၊အဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီအကာအဖဲချပ်မြေပုံ။ ဘာအကြောင်းပြောလျှင်သူတို့ပြေး? သေချာမဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်ကိုဆက်လက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာစတင်အသုံးမပြုကြပါဘူးအစားထိုးကစားသမား! ကျွန်တော်ဂိမ်းကစားချစ်ပါ။ ဒါဟာထးထက် သူကစား ၁၀၀၀၀ တွင်လူ ။ အဓိကအအားသာချက်ဤအခန်းအတွက်ပြိုင်ပွဲအတူ အသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်သင်တန်းသားများ။ မမြဲပိုက်ဆံရှိသည်၊သင်မူကား၊ကစားချင်တယ်။ ထို့ကြောင့်၊အနိမ့်ဆုံးသိုက်$၁၀ လည်းအလွန်နှစ်သက်တယ်။ ငါမကြာသေးမီကတက်ရောက်ကစားသမားငြလူမျိုးနှင့်ပါးတို့သည်ထီပေါက်နှိပ်ပါ! ငါအကြံပေးဖို့လူတိုင်းမှတ်ပုံတင်ပြီးကစား! အလောင်းကစားကုမ္ပဏီနှင့်မပေးပါဘူးလောင်းကစားဆောင်မှုများကို၎င်း၏ဧည့်သည်များ။ အကူအဘို့အလက်ဆက်သွယ်ပေးပါ။ မကစားတိုက်ရိုက်ဒီအခန်းအတွက်။ ရနိုင်ဖို့အတွက်အမြင့်ဆုံး ၊စဉ်ဆက်မပြတ်အထောက်အပံ့နှင့်ကစားအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကလပ်အသင်း၊သင်လိုအပ် ကျွန်တော်တို့ကိုရေးလိုက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ!
ချိန်းတွေ့၊တွယ်သကဲ့သို့လူကြိုက်များမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးအသိတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် နဲ့ ၊ဒါပေမယ့်လည်းအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာအမျိုးအစားဖဲချပ်နှင့်အတူပုံမှန်မဟုတ်သော။ အဘိုးအကိုင် ဂိမ်းများအားလုံးဖဲချပ်ဂိမ်းနှင့်အတူဘုံဘုတ်၊နှင့်နေသော်လည်းကျဆင်းမှုအတွက်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွား၊အဆဲအတွေ့၎င်း၏ပရိသတ်အတွက်အော့ဖ်ထူထောင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဖဲချပ်။ အတွက်ဝက်အစုသည် များသောအားဖြင့်အကြီးမားဆုံးဂိမ်း၊ကစားနိုင်အောင်သင်အလွယ်တကူငွေရှာအပေါ်လေ့လာလျှင်စည်းမျဉ်းများနှင့်တီးခတ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။ သင်အွန်လိုင်းကစားရဲ့သခင်၊တွယ်ဖဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိမ့်မည်အသစ်သင်ဖို့။ ပြီးနောက်အားလုံးရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမအသိုင်းအကတ်များကိုဒီဂိမ်းထဲမှာ၊ကစားသမားတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသောအများအပြား ၇ ကဒ်များ၊နှင့်အချို့သောသူတို့ကိုဖွင့်လှစ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊တွယ်သည်များသောအားဖြင့်နှင့်အတူကစားကန့်သတ်နည်းနှင့်မကျင်းပ နဲ့ ။ အဘယ်သူမျှမဝန်ဆောင်၌တွယ်ဖဲချပ်။ အစား၊ကစားသမားအ မီကဒ္ေတြအလျောက်နှင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်၊ပြီးတော့ကစားသမားနှင့်အတူအသေးဆုံးကဒ်ဖွင့်လှစ်စေသည်နောက်ထပ်မဖြစ်မနေအလောင်း-ယူခဲ့တယ္။ အားလုံးသည်ကစားသမားအတြက္ကနဦးအလောင်း အဂၤလိပ္၊စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသောကြိုတင်မဲအတွက်မဟာပြောင်းလဲမှုကာလအတွင်းဂိမ်း။ အဆိုပါဂိမ်းလည်းကစားမပါဘဲ ၊အထံတော်၏အနောက်အပေါ်မူတည်၏အရွယ်နည်း။ အ သည်အိုးမှအစအဦးမှာအသီးအသီး၏လက်၊နှင့်ဂိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်။ အဆိုပါကောက်ယူကနဦးအေလာင္းအစားသိမ်းထားတဲ့အတွက်ဘဏ်၏အဆုံးအထိလက်နှင့် သူတို့အောင်မြင်ဖို့အဆုရှင်များနှင့်အတူအားလုံးသည်အခြားနည်းနေရာချဂိမ်းကာလအတွင်း။ အရွယ်အစား၏ အပေါ်မူတည်ကန့်သတ်မှာကစားရာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချို့၏ကန့်အသတ်ဖြစ်၊အဖြစ်နည်း၊၊ လိမ့်မည်ဟုမှာကစားဤစားပွဲပေါ်မှာ:အလည်ဆံကတ်များနှင့်ကုန်သွယ်အတွက်ဝက်အစုဟုခေါ်ကြသည်၊လမ်းတာဝန်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးအရေအတွက်ကတ်များ၏အလျောက်:တတိယ၊စတုတ္ထ၊ပဉ္စမ၊ဆဋ္ဌမနှင့်သတ္တမမြောက်၊လမ်းအသီးသီးရှိပါသည်။ တတိယလမ္း။ အားလုံးကစားသမားကိုလက်ခံရရှိသုံးကတ်များကို:နှစ်ဦးမျက်နှာပြီးတမျက်နှာ-။။။။။ ကစားသမားနှင့်အတူအသေးဆုံးအထင်ရှားကတ္မ်ားကိုသင္မေလာင္း-။ ထိုအခါလာမည့်ကစားသမားနောက်ကွယ်မှအ စေရမည်။ ကစားသမားအခွင့်အဆင့်အလောင်းအစားခေါ်သို့မဟုတ်၊စွန့်ကတ်အသွား၊အခေါက်သို့မဟုတ်အခေါက်၊သို့မဟုတ်အလောင်းကိုတန်ဖိုးကိုညွှန်ပြခင်မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်။ ထိုအခါလူအပေါင်းတို့သည်အခြားကစားသမားအရွှေ့မွှောငျအောငျအားလုံးနည်းပင်။ လျှင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုကစားသမားတွေနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်အတူအနိမ့်ကဒ် လျှင်တစ်ကဒ်သည်ရွေးချယ်ထားသော၊သို့ဖြစ်။များက်ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ကိုက်ညီ၏ဤအကဒ်များ:အငယ်ဆုံးဖြစ်စဉ်းစားသည်ကလပ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်၊စိန်ပွင့်၊နှလုံးနှင့်င္ေနပါတယ္။ စတုတ္ထလမ္း။ အားလုံးကစားသမားကိုလက်ခံရရှိတပိုကဒ်အတွက်ပွင့်လင်းမ်က္ႏွာ၊တစ်ဦးစုစုပေါင်းနှစ်ဦး၏ကတ်အတွက်ပိတ်ပြီးနှစ်ခုကတ်များအတွက်ဖွင့်လှစ်။ ညာဘက်ပထမဦးဆုံးစကားလုံးမှဝင်ကစားသမားသူ၏အမြင့်ဆုံးပွင့်လင်း။ သူတို့ရွေးချယ်နိုင်သည်မဟုတ်နေရာမှအလောင်းစစ္ေသို့မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထားနိုင်တွင်စားပွဲ၏အလောင်းမှာဤကန့်သတ်။ ပဉ္စလမ္း။ ဖဲလက်ထွက်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရင်ဆိုင်ရကတ္အသီးအသီးမှပါဝင်သူ။ ကစားသမားနှင့်အတူအကောင်းဆုံးကတ်များကိုဖွင့်ပြုမူ။ထိုအခါအနောက်ရန်သူ့ဘယ်ဘက်ကညာဘက်ကိုဖွင့်၊ပြီးတော့မှီတိုင်အောင်၊ခပ်သိမ်းသောကစားနည်းများမှာနေရာချခြင်းနှင့်ပင်။ဆဌမလမ္း။ ကစားသမားခံယူတဦးတည်းကိုပိုပြီးဖွင့်။ ကစားသမားနှင့်အတူအကောင်းဆုံးကဒ်ဖွင့်လှစ်သည့်အဆိုပါလောင်းကစားစက်ဝိုင်းစစ်ဆေးနေခြင်းအားဖြင့်၊အခေါက်ချစ်ပ်သို့မဟုတ်တင်သည်ကိုအပေါ်ဇယား၏ဒုတိယအဆင့်မြင့်ကန့်သတ်တန်ဖိုး။ အဆိုပါကစားသမားကိုအောက်ပါလုပ်သူတို့ရဲ့အလှည့်ရစ်တိုင်အောင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်များမှာ။ အဆိုပါလေလံမည်မဟုတ်ရလဒ်။ သတ္တလမ္း။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ပေးခဲ့သည့်ကဒ်သတ္တမမျက်နှာ-ဆင်းကဒ်။ ကစားသမား'လုပ်ရပ်များကိုထပ်ခါတလဲလဲအလားတူအဌမလမ္း၏။ သောသူအပေါင်းတို့ကစားသမားတွေအတွက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းလက်ထုတ်ဖေါ်သူတို့ရဲ့ကတ်များနှင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ိဆုရှင်:အဆိုပါကစားသမားခဲ့သူကောက်ခံသည့်အကောင်းဆုံးများပေါင်းစပ်ငါးကတ်များအသုံးပြုပြီးသူတို့ရဲ့ခုနစ်အိတ်ကတ် ၄ အဖြင့္ ၃။။။။။ အဆိုပါ၏ဆုရှင်အလက်ယူလုံးအိုးပါ။ အဖြစ်အခြားမည်သည့်ဖဲချပ်ဂိမ်းရဲ့သဖဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုများအတွက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုဆုအတွက်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊အနိုင်ရခွဲခြားထားပါသည်အမျှအကြားအားလုံးအသက္ရွင္ရတာ။ ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုတွယ်ဖဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ကြည့်ကြရအောင်ဥပမာလေး-ကစားသမား$၁ ၂ ကန့်သတ်ဂိမ်း:တွယ်ဖဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလျှောက်ထားရန်ပေါင်းစပ်သောအကိုက်အခြားဖဲချပ်ဂိမ်းအမည်၊မြင့်မားကတ်တွဲ၊နှစ်လုံး၊အစုံသုံး၊ဖြောင့်ဖြောင့်၊ဆွဲအရပ်၊အိမ်အပြည့်ပဲ၊စတုရန်း၊ ဆေးကြောခြင်း၊နှင့်တော်ဝင်ဆေးကြော။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ဤပေါင်းစပ်။ သာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရုပ်ပုံ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်လိုအပ်ရွေးချယ်ဖို့စတင်သင့်လက်လွန်ဂရုတစိုက်။ ကောင်းသောလက်ဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အောက်ပါအတိုင်း:ဤစလက်နှင့်မဟာဗျူဟာသင်ကူညီလိမ့်မည်ကစားအောင်မြင်တဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူလက်ျာဘက်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့တုတ်ဖို့သတိထားကစားပါ။ ပြီးနောက်အားလုံး၊ခုနစ်ကတ်ရဲ့သဖန်တီးအစားအန္တရာယ်ရှိတဲ့လယ်အရာအတွက်ကြောင့်မခက်ခဲသည်ကိုယ်အပင်နှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောလက်။ ခုနစ်-ကဒ်တွယ်သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်းအရမ်းတက်ကြွနှင့်ရန်လိုသည်။ ဒီစည်းကမ်း၊ပိုကတ်များပေးထက်အခြားအမျိုးအစားများ၊အရာကိုဆိုလိုသည်ပိုအမျိုးမျိုးအချက်အလက်များ၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ပိုပြီးစုဆောင်းဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်။တွယ်ဖဲချပ်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထံမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားအသိတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင်. နဲ့ ၊ဒါပေမယ့်သင်အလျင်အမြန်ရန်အသုံးပြုရသူတို့စားလျှင်သင်သည်မှန်မှန်။ ဒါဟာအများကြီးပိုပြီးခက်ခဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်စနစ်တကျရွေးကောင်းစတင်လက်အတွက်ကြောင့်အထိန်းခံရဖို့လိုအပ်အများကြီးပိုအရေးပါ၏သင့်ရဲ့ကတ်များထက်၌ကျင်းပ '။.
ထိပ်တစ်စုံအင်္ဂလိပ်ကနေထိပ်တစ်စုံထိပ်တန်းအကောင်းဆုံး၊အမြင့်ဆုံး-တွဲ-အစပ္တစ်စုံပါဝင်ပါသည်တအိတ်ကဒ်နှင့်အမြင့်မားဆုံးကဒ်အဘုတ်အဖွဲ့။ အယူအဆ၏ထိပ်တစ်စုံသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အဓိကသူတွေအတွက်ဖဲချပ်။ ဒါကြောင့်'လာ'အတော်လေးမကြာခဏနှင့်အပေါ်မူတည်ပြီးအခြေအနေရနိုင်၊အဖြစ်တစ်ဦးအားကောင်းတဲ့ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်လုံးဝအသုံးမကျ။ ဤကိစ်စတှငျ၊၎င်းပုံကအတော်လေးခက်ခဲတဲ့နှင့်အချိန်တိုင်းလိုအပ်သည်ကိုကောင်းစွာပြုပါ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘုတ်အဖွဲ့မြေပုံနှင့်လုပ်ရပ်များ၏ပြိုင်ဖက်။ သင်ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်အတွက်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူတို့ရဲ့အတိတ်အလက်။သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရှိစေခြင်းငှါတူညီသောထိပ်တစ်စုံသာသူ၏လက်၊သူ၏ဩစေခြင်းငှါ၊ထက်ပိုမိုမြင့်မား။ ထိပ်တစ်စုံသည်အခြေခံအားသာနိုင်ရိုက်နှက်ရန်အင်္ဂသောကြောင့်၊လူအနည်းငယ်ကကစားထုတ်ပြန်နှင့်အတူအနိမ့်။ ထိပ်တစ်စုံတစ်ဦးရှိပါတယ်အခွင့်အလမ်းကောင်းများတိုးတက်ရန်၊အကျော်။ သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်'ဖမ်း'နှစ်လုံးလာမည့်အပေါ်လမ္း၊နှင့်ပင်ထိပ်တန်းထား! ပြီးတော့အပြည့်အဝအိမ်တော်သည်မဝေးကွာ။ သီးခြားလိုအပ်သည်သတ်မှတ်အဂိမ်း၏ထိပ်လုံးအမျိုးမျိုးဆန့်ကျင်ဆွဲယူ။ သင့်အပေါ်တစ်ဦးသည်မျက်စိစောင့်ရှောက်အဘယျသို့သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရှိသည်နိုင်။ အလွန်လျော့ရဲကစားသမားများနေရာကြီးမားနည်းမရှိရင်လည်းကောင်းရှိခြင်းကောင်းတစ်လက်အနေအထားနှင့်အထက်သို့မဟုတ်အခိုင်ဆွဲ။ ဒါကြောင့်၊လာမယ့်ကဒ်ရောက်ရှိပြီးသင်မြင်သောတစ်စုံတစ်ဦးအထင်ရဲ့ဆွဲပြီစေခြင်းငှါစိုက်ပျိုးသီးအတူတူ၊ထို့နောက်သင်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအလွန်ဂရုတစိုက်နှင့်မှသင်၏ထိပ်တစ်စုံလိုအပ်ခဲ့လျှင်။ သင် ငါတို့သည်အထိပ်တစ်စုံ။ သို့သော်လျှင်သင်တို့သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘုတ်အဖွဲ့၊သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိစေခြင်းငှါအထိဆွဲဆွဲသို့မဟုတ်ဖြောင့်တစ်ကြောင်းဆွဲပါ။ ၏သင်တန်း၊သင်သည်သင်၏ပေါင်းစပ်အားကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်၊ဒါပေမယ့်အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အနာဂတ်အတွက်မည်ဖြစ်ဝေးနောက်ကွယ်မှ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အလှည့်သိသိသာသာနိမ့်သင့်လက်နဲ့စေနီးပါးအသုံးမကျ။ပထမဦးဆုံးအမှု၌၊သင်၏အပြိုင်ဘက်ရှိစေခြင်းငှါဆေးကြောခြင်း၊ဒုတိယလမ္း၊တတိယ၊သင့်အတွဲမရှိတော့ထိပ်တစ်စုံနှင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်မည်ဘယ္ဘက္မွကြောင်း၊သူ့ကိုပေးကမ်းထိပ်တစ်စုံ။ အလားတူပင်၊သင်ကြည့်ရှုအခြားဘက်ခြမ်းမှ။ နှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးဆွဲနှင့်ထိပ်တစ်စုံ၊ဝေးရှေ့ဆက်ပြီးမကြာခဏမလူများစွာနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်။ အပေါ်နပ္၊ပေါင်းစပ်၏ထိပ်တစ်စုံ အထူးသဖြင့်ဘယ္ဘက္မွတန်ဖိုးထားကြသည်။ ။ အီး။၊ သင်ထိပ်တစ်စုံနှင့်ဒုတိယကဒ်သင်၏လက်၌ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်သင်၏တွဲ။ ထို့အပြင်ဖြစ်ခြင်းမှဩစရာကောင်းပြီ၊သင်အများကြီးပိုကောင်းအခွင့်အလမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၏။
မင်းအတွက်၊ကောင်းစွာ၊ဒီအနားမှာရှောက်သွား။ တစ်စုံတစ်ဦးသည်သူတို့ကြိုက်တယ်၊နှင့်ဤဆောင်းပါးကိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ရုံထည့်ရန်သင့်ငါး ? အဖဲချပ်ကစားခြင်းအတွက်အဖြစ်များစွာသောအခြားဂိမ်းများ၊ကေးရှင်းဖန်တီးခဲ့ကြသောပူဇော်ကစားရန်တစ်လျှော့ချဗားရှင်းဖဲချပ်–အခေါ်အဝန္တိုဖဲချပ်။ ဝန္တိုဖဲအင်္ဂါရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းနှင့်အနည်းငယ်မျှသာ။ တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊အတွက်ဝန္တိုဖဲချပ်ဂိမ်းကစားဆန့်ကျင်ဉာဏ်ရည်တုနှင့်အစစ်အမှန်မဟုတ်။ မီးေဖဲချပ်ဂိမ်းအများဆုံးမကြာခဏကစားအတွက်-ဖဲချပ်။ အွန်လိုင်းဝန္တိုဖဲချပ်ဂိမ်းအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်၊အခမဲ့၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းမလိုအပ်ပါဘူးနှင့်တိုတောင်းတဲ့ဂိမ်းကြာချိန်ဂိမ်း၏အားကစားသမားကိုယ်တိုင်။ အချို့ဝန္တိုဖဲချပ်ဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အခမဲ့သည်မှာ င့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးကစားတာ၊အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မပါဘဲ။ မင်းအတွက်၊ကောင်းစွာ၊ဒီအနားမှာရှောက်သွား။ တစ်စုံတစ်ဦးသည်သူတို့ကြိုက်တယ်၊နှင့်ဤဆောင်းပါးကိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ရုံထည့်ရန်သင့်ငါး ? ဒါဟာအများဆုံးလူသိများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးဆရာများမှာတက်ကြွကစားသမားတွေနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံသောသူကိုရှင်းပြအတွက်ဖတ်ရှုခွင့်အလမ်းဘယ်လောက်အောင်မြင်စွာကစားများအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံအတွက်ပေါင်းသည်။
ယခုသင်နိုင်ကစား ဖဲဖဲ၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာမှကျေးဇူးတင်စကားအသစ် မိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကို။ ဒီမိုဘိုင်းဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းရရှိနိုင်သောအများဆုံးအသံုးျပဳသူမ်ားနှင့်ရခ် ဖုန်းအားလုံးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆဲလ်ဖုန်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး ၃။ မှတ်တမ်းအတွက်အသင့်ရဲ့ ဖဲအကောင့်ကိုအပေါ်မိမိတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြပါလျှင်အကောင့်တစ်ခုရှိသည်မဟုတ်သေးပါ၊ထိုအခါမှတ်ပုံတင်၊"အျဖဲ"အတွက်ဘယ်ဘက်ခြမ်းနူးနှင့်ဒါင္းလိုအပ်သောဆော့ဝဲလ်များအတွက်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်း။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့အခမဲ့အစီအစဉ်၊သင်ရရှိလိမ့်မည် ၂ အခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ပထမဦးဆုံးနှင့်အတူနောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်များ၊နှင့်ဒုတိယအသင်သည်သင်၏နှင့်အတူချိတ်ဆက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်။ ကိုထိန်းချုပ်သင့်ရဲ့ဖဲချပ်ဂိမ်းကိုသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှစေခြင်းငှါအနည်းငယ်ပုံမှန်မဟုတ်သော၊ဒါပေမယ့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပို၍ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ၊ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်လိုက်လျောညီထွေ။ ယခု၊သင်သာကစားတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် ဖဲချပ်ကိုအသုံးပြုဤအက္ပ္၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ။ ထွန်သာအျ ဖဲအတိအကျတူညီဖြစ်ခါကစား ဖဲချပ်ပေါ်မှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်အားလုံးအပိုဆုသုံးချရန်တရားဝင်တည်ရှိနေကစားသောအခါတွင်မိုဘိုင်းဖုန်း!
ဒါကြောင့်၊သင်ပြီးသားကောင်းစွာ-ကိုလညျးတတျကြှ သင်အခြေခံအချက်များကိုသိဖဲချပ်အဝေါ်အသိအခြေခံပညာမဟာဗျူဟာ၏ဂိမ်း၊သင်ရှိစေခြင်းငှါအနည်းငယ်ဖတ်စမတ်စာအုပ်နှင့်အမည်၏ပထမ ၁၀ နှစ်ကောင်မှာငွေသား။ အခုဆိုရင်သင်ချင်မှတ်ချက်နှင့်အသစ်တစ်ခုခုကိုစမ်းကြည့်ပါ? ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳခရိုကန့်သတ်ပြိုင်ပွဲ။ ဤသည်ပြိုင်ပွဲနှင့်အတူအနိမ့်င္ခြကုန်ကျစရိတ်၊နှင့်ဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်အရာ၊အတော်လေးမကြာခဏ၎င်း၏အခြို့သောငွေပမာဏမှပိုက်ဆံဖဲချပ်။ အတစ်ခုလုံးကိုဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်ဆီအထဲမှအကြွင်းအကျန်ကစားသမား၁၀အရအဏန်းသင်္ချာတိုးတက်မှု။ ဒီနေရာမှာအချို့၏လက်ရှိမိုက်ခရို-ကန့်သတ်ပြိုင်ပွဲသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံဖဲအခန္းကသိသိသာသာဝှက်ထားသည်၊ဒါပေမယ့်သင်အလွယ်တကူရှာတွေ့ဂိမ်းစာရင်းထဲမှာသင်အကြိုက်ဆုံးအခန်း:$၀။၀၁ႏွပါတယ္။၃၅၀လူပူးပေါင်းတိုက်၊နှင့်ဖဲချပ်ထပ်အခန်းနောက်ထပ်$၂၅ တွက်ငွေသား။ ၄၀ ရှိပါတယ်ဆုနှင့်ကစားသမားအဘယ်သူသည်အယူအ ၄၀ နေရာရရှိ၏လေးပုံတစ်ပုံတစ်ဒေါ်လာနှင့်လက်မှတ်မှအလားတူအပတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲနှင့်အတူတိုးမြှင့်ဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၅ ဆင့်အဘို့အဝန်ခံချက်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲအပတ်စဉ်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊သင်လုပ်နိုင်သည် လက်မှတ်မဝယ်သို့မဟုတ်အနိုင်ရမှာနေ့စဉ်ပြိုင်ပွဲအထက်ကြည့်ပါ။ ဖဲအခန်းထပ်လောင်း$၃၅၀ မှဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်။ ရှိပါတယ်အတော်လေးတွေအများကြီးထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ဖဲချပ်အခန်းပေါင်းသူတို့ကနေရာယူသောနေ့ရက်ကာလကိုတလျှောက်လုံး၊ဒါကြောင့်သင်ပင်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုယ်အဘို့။ ေငြဂိမ်း၊သင်ပြောသည်အဘို့အမျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်ပြိုင်ဘက်ကစားသင့်ရဲ့စားပွဲ၌၊မှတ်စုများကိုယူ၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ ကစားသောအခါတွင်မိုက်ခရို-ကန့်သတ်ပြိုင်ပွဲ၊သင်ရှိသည်လိမ့်မည်နီးပါးမျှမထိုကဲ့သို့သောဇိမ်ခံကားအဖြစ်မှစွမ်းရည်ကိုစောင့်ကြည့်။ အဖြစ်မကြာမီသင်ထိုင်မှာစားပွဲ၊သင်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်း။ အဖြစ်မကြာမီသင်ကြည့်ရှုရန်စတင်မှာနီးနီးကပ်ကပ်ကဤသို့မဟုတ်ပြိုင်ဘက်-ဘယ်လိုပေါက်ကွဲ! ဒါဟာထွက်ခေါက်အားဖြင့်တစ်ဦးပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်ကစားသမားထိုင်ဖို့သင်၏လက်ျာ၊သူကျွမ်းကျင်ကျင်တီးခတ်တစ်ဦးအထင်ထင်မဖြစ်အောင်ဖြောင့်မဟုတ်ရှိပါတယ်ပြသမိမိမည်သည့်လမ်းအတွက်ဤအချက်အားတက်။ တစ်ချိန်ချိန်၊သင်ပင်စိတ်ကူးခဲ့သောဤ"ငါး"ကဝါကစားသမားတွေအကြောင်းရေးသား။ သို့သော်ထိုသို့မကြီးရှိပါတယ်! သင်စတင်အကြိမ်ကြိမ်အစအဦးမှ။ နှင့်၊တစ်ချိန်ကခေါ်ဆောင်သွားမယ့်တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုရန်နှင့်ထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ ၏"ဆက်သွယ်ရေး"မဟာဗျူဟာ၊သင့်ရဲ့စားပွဲသည်တစ်ဖန် ။ ၏သင်တန်း၊သင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ဒီမှာကစားသမားအတူတူစားပွဲကိုပြန်တစ်လျှောက်လုံးအဆိုပါပြိုင်ပွဲ။ ဒါပေမဲ့ငါအကြံပေးလိုအောင်မှတ်စုများမပါဘဲအမှန်တကယ်မျှော်လင့်အားအစည်းအဝေး။ မတူဘဲငြဂိမ်းများ၊ဘယ်မှာသင်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်အနားယူရန်အချိန်နှင့်မည်မျှအချိန်မှပြန်လာသောအခါ၊သင်ရိုက်ထည့်တဲ့မိုက်ခရို-ကန့်သတ်ပြိုင်ပွဲ၊သင်အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးကြောင်း-နာရီဂိမ်းနှင့်အတူ၊အသေးစားငါးမိနစ်ကြာအားလပ်ချိန်တိုင်းနာရီ။ အများဆုံးအသေးစားကန့်သတ်ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးအကြောင်း ၁၀-၁၂ နာရီ၊ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းအရေးပေးနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်လိုအပ်သမျှကိုအဘို့ဤအချိန်အတွက်ကြိုတင်မဲအတွက်သေချာစေရန်အလို့ငှာအဆင်ပြေဂိမ်း။ သင်အပေါ်စီစဉ်နေသို့ရောက်ရှိအဆုံးသတ်မဟုတ်။ အဆင်ပြေမသည်အကြှနျုပျအဘို့ကစားရန်နှောင်းပိုင်းကညဦးယံ၌၊ဒါကြောင့်အစဉ်အဆုံးအချိန်သည်၌အဘယ်သူမျှအကြာတွင်ထက် ၃-၄ နာရီနံနက်အချိန်၌ထွက်ပေါ်သောကြာနေ့သို့မဟုတ်စနေနေ့။ အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီအပေါ်ဒီဂိမ်းရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များ၊နိုင်အောင်သေးငယ်တဲ့နိုင်ငံ၏မဟာဗျူဟာအတွက်မိုက်ခရို-ကန့်သတ်ပြိုင်ပွဲ။ ဒါကြောင့်၊အကျဉ်းချုပ် ၊ ကစားသောအခါတွင်မိုက်ခရို-ကန့်သတ်ပြိုင်ပွဲ၊ခြင်္သေ့ရဲ့ရှယ်ယာအချက်ကဖယ်ရှား၊နှင့်တင်းကျပ်ကြောင်း-နာရီဂိမ်းနှင့်ခိုင်မာသောဆွေမျိုးများအသုံးပြုမှုအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းပညာရှုပ်ထွေးဟာဗျူဟာ၏ဂိမ်းကစားခြင်း။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ အလေ့အကျင့်! ကိုယ့်အလေ့အကျင့်။ အပျောက်အနည်းငယ်အဆင့်လိမ့်မည်ခိုင်မာပစ္စည်းကိုသင်လေ့လာသင်ယူပြီးပြီ။ နှင့်အသေးစားနည်းစေလိမ့်မည်ထိုမကျေနပ်မှုများ၏ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းခါးသော။.
ဖတ်'ဖဲသင်္ချာကနေတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်'-ဒါဝိဒ် -စာမ်က္ႏွာ ၁-
ဤအကြောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်အထွေထွေဖဲသီအိုရီသဘောတရားများကိုလျှောက်ထားဖို့အားလုံးနီးပါးဖဲအပြောင်းအလဲတွေဟာ၊၅-ကဒ်ဆွဲယူဖို့တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကိုင် '။ မမျှော်လင့်ထားတဲ့နေရာမှာသင်တွေ့လိမ့်မည်အဆင်သင့်လုပ်ချက်ပြုတ်နည်းများအဘို့အအမျိုးမျိုးသောဂိမ်းများပါဝင်သည်ဟု၊၏အခြေခံစည်းမျဉ်းနှင့်ဖော်ပြချက်များ၏အရေးယူပာသည္။ တွေ့အကြုံမရှိသေးဖဲကစားသမားတခါတရံမေးပါ၊"သင်ဘာလုပ်ပါဒီအထူးသဖြင့်အခြေအနေ?" တကယ့်ကိုအဘယ်သူမျှမမှန်ကန်သောအဖြေကိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းတစ်ခုကြောင့်၊ထိုမေးခွန်းကိုယ်နှိုက်သည်မမှန်ကန်။ စည်းကမ်းအကြောင်းပြဋ္ဌာန်းကျဆင်းတစ်ဖက် အခြားတစ်ဖက်တွင်၊နှင့်ပင်အပေါ်တတိယ၊ဒါကြောင့်မရွှေ့ကစားသမားအထက်နောက်ထပ်အလွန်အခြေခံ။ ပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊"အဘယ်အရာကိုအချက်များသင်စဉ်းစားဒီအထူးသဖြင့်အခြေအနေမပေးခင်ကိုအဘယ်သို့ပြု?သီအိုရီ၏ဖဲ"ေဆြးေႏြးအတိအကျကြောင်း။ အဆိုပါစာအုပ်စမ်းကဏ္ဍတိုင်း၏လက်မှဖွဲ့စည်းပုံအပရောဂျက်အပြီးပြီးနောက်ဂိမ်းနောက်ဆုံးကဒ်ထားပါတယ်။ အားဖြင့်ရှင်းပြ၏ယုတ္တိဖဲ၊ကျွန်မဒီစာအုပ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်ကိုစာဖတ်သူ၏အဘယျအမြိုးမြိုးရာကစားသမားအဖြစ်သင့်ကြောင်းစဉ်းစားလျှင်လိုမြှင့်ဖို့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်။ ရုပ်ဤသဘောတရား၊ငါအဓိကသုံးငါးဂိမ္း:၅-ကဒ်မဲနှိုက်၊၇-ကဒ်ရဲ့သကိုင် '၊ဆြဲ ၊သို့မဟုတ် ၇-ကဒ်။ စာဖတ်သူတွေအဘယ်သူသည်အတူအကျွမ်းတဝင်မဟုတ်မည်သည့်၏စာရင်းအမျိုးအဖဲချပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်တစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်။ ဤစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသည်စံဖဲဝေါဟာရများထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်နပ္၊အပေါ်စားပွဲပေါ်မှာ၊အဌမလမ္း၊ဗိုင်းရပ်၊နှင့်အခြားသူများ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်၊ကျနော်ရှင်းပြဤသဘောတရားအတွက်စာသား၊ဒါပေမယ့် တစ်ဦးလည်းရှိပါတယ်ဏာပိုင္အဖဲချပ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးတွင်စာအုပ်များ၊လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်ထွက်စစ်ဆေးအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာမဖြစ်ကြောင်းကို။ ဖဲသီအိုရီတစ်ခုကျယ်ပြန့်နှင့်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၏ ရဲ့ဖဲချပ်သီအိုရီများ၊၁ရေးသားသောဒါဝိဒ် နဲ့ပထမဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေချိန်တွင်အကြှနျုပျတို့သညျဂတ်ဂိမ်းကစားစာအုပ်ကလပ်အတွက် ၁၉၇၈။ ဒါဟာသတင်းအဓိကအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်ဖဲချပ်။ ဒီအလုပ်အတွက်ရည်ရွယ်ပရိတ်သတ်များကျယ်ပြန့်–အသိတဲ့သူတွေအခြေခံပြီးစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့တစ်ဦးကောင်းကစားသမားများ၊အဘယ်သူသည်ချင်ကျွှန်၏အနှစ်ကိုဒီဂိမ်းရဲ့။ ကလွယ်ကူမယ့်၊ဒါပေမယ့်အစေ့စေ့စာဖတ်သူအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်။ အယူခံအဖဲချပ်ဂိမ်းအတွက်တည်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုပထမတစ်ချက်မှာကအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာဒါဟာနက်ရှိုင်းသော၊ချမ်းသာနှင့်ပြည့်စုံ၏၊သိမ်မွေ့ရုပ္ရွင္ႏ။ ကြောင့်ရိုးရှင်းစေရန်၊လူတိုင်းသင်ယူနိုင်ကကစားနည်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွက်၊နှင့်အစပြုပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်ကစား၏ပင်ဆုံးဖြတ်သောသူသည်အလွန်ကောင်းမှာပါ။ တစ်ဦးအနေဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရဲ့အမှတ်င့်၊အဟိ ရိုးရှင်းပေးသောအများအပြားကစားသမားတွေအထင်အကြောင်းသူတို့ကောင်း၊အလွန်ဆွဲဆောင်မှုအမြင်မှသည်အမြတ်အစွန်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ရေကူးကန်သို့မဟုတ်ဂေါက်သီးကစားသမားများမြန်မြန်ဆန်ဆန်နားလည်သဘောပေါက်သောသူတို့၏အဆင့်ကိုကစားအသိသာနိမ့်ပြီး၊သူတို့အလိုအသန်မစွမ်း။ ထိုဆန့်ကျင်တွင်၊ဖဲကစားသမားပြန်လာစားပွဲသို့အထပ်ထပ်၊ဆာင္ရြက္ရငွေနှင့်အပြစ်င်းတို့၏ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်ကံဆိုးထက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆင်းရဲသားစွမ်းဆောင်ရည်။ ကြောင်းမှန်သည်သာတည်းဂိမ်းအစည်းအဝေး၊အကောင်းဆုံးအရှုံးသမားအချို့ပေါင်းစပ်၏အခြေအနေ။ ဝင်တို့၏ကမ္ဘာ့စီးရီး၊ဓာတ်ချစ်သူများ၏မြန်မာ၊ကူခဲ့အရေးပါသောအားသာချက်ကျော်ကျန်ရှိသောရှစ်ကစားသမားတွေ။ တွင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲနာရီ၊သူရွစ္ဦးရွိနှစ်လက်၊ဘယ်သူ့ပြိုင်ဘက်ပြီးစီးပေါင်းစပ်ဖြစ်ခြင်း၊တစ်ဦးခွေးနှင့်အတူအလေး ၂၁၁။ ရုတ်တရက်၊ချစ်သူများနေ့ကြီးများထဲကခေါက်ပြိုင်ပွဲ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်၊နှစ်ဦးစလုံးအတွက်၊သူ့ပြိုင်ဘက်လိုအပ်၏တဦးတည်းနှစ်ကျန်ရှိသည့်အကြား ၄၄ ကတ်များကိုမစား၊သူသည်တယ်။ သို့သော်၊အတွေ့အကြုံကိုဒါခေါ်ဒုက္ခဆင်းရဲ ရိုက်သည်ပိုပြီးအသုံးများအတွက်တစ်ဦးကောင်းကစားသမားများကဲ့သို့ချစ်သူများထက်အဘို့အပျမ်းမျှသို့မဟုတ်နည်း။ "ငါကြားဖူးတယ်အကောင်းကစားသမားတိုင်ကြားဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းအကြှနျုပျကိုကံမကောင်းသူတို့အမြဲ၊"ချစ်သူများနေ့ပြောနောက် ၁၉၈၁ ပြိုင်ပွဲ၊"ဒါပေမယ့်သူတို့လိုတိုးတက်လာဖို့သူတို့ရဲ့ဂိမ်းနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ဂိမ်းကာလအတွင်း၊သူတို့လိုအပ်ကြောင်းသဘောပေါက်သည်။ နေတယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးစွာသောကစားသမား၊လူပြေးကြလိမ့်မည်သင်တို့အပေါ်မှာအများကြီးပိုပြီးမကြာခဏမထက်ပြေးသူတို့ကိုကျော်၊ရိုးရှင်းစွာသောကြောင့်၊သူတို့အများကြီးပိုဆိုးလက်ကိုဆန့်ကျင်သင်ပိုပြီးမကြာခဏ။ သင်ရုံမပြေးကျော်တစ်ဦးပြိုင်ဘက်မဟုတ်လျှင်၊သင်သင်တို့ပြုသမျှပိုက်ဆံသွင်းထားနှင့်အတူအတွက်အဆိုးဆုံး။" ဖဲပညာရှင်များမပေါ်မှီခို၊ချစ်သူများအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်။ သူတို့မှာစစ်ပွဲကံကောင်းခြင်းနှင့်အတူ၊သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစားနှင့်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်ထွက်ခွာအောင်မြင်သောခရီးသို့နည်း။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊သူတို့ပိုမိုမကြာခဏအနိုင်ရအထက်သူတို့ရှုံး။ မှာအကွာအဝေး၊လူတိုင်းရရှိ၏တန်းတူအချိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးကတ်၊ဂိုးနဲ့အနိုင်ရ။ ဆုံးရှုံးသွား။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးဖဲကစားသမားပေါ်မှီခိုအားကြီးသောလက်နှင့်ကောင်းသော။ ဖဲပညာရှင်များအသုံးပြုခြင်းဖို့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုညစ္ညမ္းဆုံးရှုံးမှုကနေသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့လက်နှင့်တိုးမြှင့်အမြတ်အစွန်းမှ၎င်းတို့၏ကောင်းမွန်သော။ အပြင်၊သူတို့ပိုကောင်းနိုင်ကြသည်နိုင်အောင်အကဲဖြတ်ရန်သည့်အခါတစ်ဦးအားကြီးသောလက်သည်အမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးနှင့်အခါအားနည်းသောလက်သည်အကောင်းဆုံး။ မည်သို့ပင်သင်တို့၏အဆင့်အားကစား၊အောက်ပါဤစာအုပ်၏အခန်းမှသင်မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်သီအိုရီနှင့်ဆဖဲချပ်ကြောင်းပပျောက်လိမ့်မည်သင်သည်သင်၏စွဲဖို့ကံကောင်းခြင်းနှင့်သင်သတ်မှတ်လမ်းကြောင်းကိုအပေါ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်အဘယ်သူသင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှီခို။ ဖဲချပ်သည်များအတွက်ယေဘုယျနာမည်စာသားအတိုင်းရာပေါင်းများစွာ၏အပြောင်းအလဲတွေဟာဒီဂိမ်း၏၊ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးမှာလဲအပြားလာကြသည်။ အဲမြင့်ဂိမ်းများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ၇-ကဒ်တွယ်သို့မဟုတ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အကိုင် '၊အရာအတွက်အကြီးဆုံးလက်အနိုင်ရမှာ၊အရပ်အနိမ့်ဂိမ်းများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆွဲ နှင့် ၊အရာအတွက်အသေးငယ်ဆုံးအလက်အနိုင်ရရှိ။ လည်းရှိပါတယ်ထားေသာအဆိုပါဂိမ္း:သူတို့အကောင်းဆုံး အမြင့်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအနိမ့်လက်ကိုစားအိုး။ တို့တွင်ထိုမြင့်သော၊နိမ့်ကျ၊နှင့်မင်္ဂလာပါ-အဆိုပါဂိမ်းရှိပါတယ်၊အပြောင်းအလဲတွေဟာကဲ့သို့ ၅-ကဒ်မဲနှိုက်ရပ်၊အလက်ပုန်းကွယ်နေကြသည်၊နှင့်ဂိမ်းများကဲ့သို့ ၇-ကဒ်အတွယ်၊အရာအတွက်အချို့ကစားသမား'သည္မြင်နိုင်ဖို့လူတိုင်း။ ကားကို၊တောရိုင်းကဒ်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုအထူးထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်မဆိုဒီဂိမ်းဖန်တီးဖို့ပုံမှန်မဟုတ်သောအပြောင်းအလဲတွေဟာထိုကဲ့သို့သောဘေ့စ်ဘောအဖြစ်၊အတိုင်းလိုက်နာသောမိဖုရား၊၊နှင့်အခြားတစ်အိမ်ရှင်အမည်ဖြင့်ခဲ့ကြကြောင်းဖြည့်စွက်အမွှေးအကြိုင်ကိုအိမ်မှာဖဲချပ်ပါပဲ။ေ ဒီ့အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကစားသူမ်ားထိုကဲ့သို့သော များသောအားဖြင့်အရေးယူ-ဆာလောင်မွတ်သိပ်အပျော်တမ်းအဖြစ်သောသူသည်လူများသည်အမဲလိုက်ခြင်းတို့ကိုကတည်းက၊သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံခွင့်ပြုလိုက်လျောညီထွေဆန်းဂိမ်းပိုမိုလွယ်ကူထက်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ။ သို့သော်၊မီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်လာထူးခြားဆန်းပြားအားကစားပြိုင်ပွဲ၊သူတို့သခင်အခြေခံသဘောတရားများ၏စံ။ အခြားအဓိကကွာခြားချက်အကြားဖဲချပ်ဂိမ်းအလောင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ အများစုဟာအိမ်မျိုးကွဲ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အများစုဟာဂိမ်းများအတွက် သည္ဥယျာဉ်တော်၊သို့မဟုတ်အခြားအရပ်ကန့်သတ်ဂိမ်းများ၊ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အဘယ်မှာအနည္းဆံုးအေလာင္းအစားကန့်သတ်။ အများအားဖြင့်အနိမ့်ကန့်သတ်ဂိမ်းမှာ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ၇-ကဒ်အတွယ်နှင့်အတူကန့်သတ်$၁-$၃၊အမွတ္ နှင့်အောက်ခြေမှကဒ်ကုန်သွယ်စတင်သည်နှင့်အတူအလောင်းအစား၏၅၀ ဆင့်။ အတွက်နောက်ဆက်တွဲလည်၊အမြင့်မားဆုံးကဒ်အပေါ်စားပွဲပေါ်မှာကျော်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လောင်းကစား$၁၊$၂ သို့မဟုတ်$၃။ မှာမြင့်မားတဲ့ကန့်သတ်မှာကန့်သတ်ဆွဲအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် ကဒ်ကလပ်အသင်း၊အလောင်းအရွယ်အတင်းကြပ်စွာဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ ဥယျာဉ်တော်၌၊အေလာင္းအစားနှစ်ဆပြီးနောက်ဆွဲပါ။ မှာသူတို့နှစ်ဆအတွက်အကြာတွင်အလည်အလံ။ အတွက် ၇-ကဒ်အတွယ်နှင့်အတူကန့်သတ်$၅-$၁၀၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦးရှိပါတယ် ၅၀ အဆင့်၊အောက်ခြေမှကဒ်စတင်သည်သို့မဟုတ်လေလံစေသည်အ$၁ ၊လာမည့်ပတ်လည်အတွဲ၊နည်းနှင့်ပေါ်ပေါက်ရမည်$၅၊အမှတ်ပိုပြီးအဘယ်သူမျှမ။။။။။ အတူတွဲဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်လေးကဒ်များ၊ကစားသမားများသောအားဖြင့်အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုအလောင်း$၅$၁၀၊ဒါပေမယ့်မည်သူမဆိုဟဿဖြစ်ရတော့လုပ်၏ပမာဏကိုအတွက်$၁၀။ နောက်ပဉ္စက၊ဌနှင့် သတ္တမအလောင်းနှင့်ကတ်များကိုမြှင့်ခြင်းကိုခံရမည်$၁၀၊မခွဲခြားဘဲရှိမရှိ၏တစ်စုံတစ်ဦးရှိုးတစ်ရံမ။
နာက္တစ္မ်ိဳးဖဲချပ်–အကြီးဆုံးဥရောပဖဲခန်းတည်ထောင်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့်အလုပ်လုပ်အတွက်ကောင်းစွာလူသိများဖဲကွန်ယက် ။ အမြတ်အစွန်းဆုကြေးငွေ၊အဆက်မပြတ် ၊အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီး၊မြန်ရုပ်သိမ်းရေးအနိုင်ရလက္ခဏာများမှာဤအခန်း၏။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်အချို့ကမ်းလှမ်းအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်ဂိမ်း၏အရင်ကဆိုရင်များအတွက်စည်းရုံးအထူးပြိုင်ပွဲများအတွက်။ အခန်းဖြစ်သည်အဖြစ်သစ္စာအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ ငါဖန်တီးပါပြီ-ရုရှဘာသာစကားအထောက်အပံ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ရုရှားအားကစားသမားတွေအဖြစ်အဆင်ပြေသောနည်းလမ်းများမှရန်ပုံငွေများကိုငွေသွင်းခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာ။ ကျယ်ပြန့်အများစု၏ငွေသားဂိမ်းများနှင့်ပြိုင်ပွဲမှာကစားအတွက်ယူရို၊ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်ရှာဖွေနိုင်ခြင်းပြိုင်ပွဲနှင့်အတူအမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ဗြိတိန်ပေါင်။ နာက္တစ္မ်ိဳးဖဲချပ်သည်သာအဖဲချပ်၊ဒါပေမယ့်လည်းနိုဖင့္၊ကစားတဲ့နှင့်ကဒ်ဂိမ်းများနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအရောင်း။ သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်သမျှသောဤလောင်းကစားဂိမ်းအပေါ်ကြန္ပ်ဴတာမ်ားလုပ္လုပ္ေနှင့် ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအပေါ်အပြေးအန္းနှင့် ။ နာက္တစ္မ်ိဳးဖဲတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတစ်နေရာနိုင်ပါတယ်ေဒါင္းရအကျွမ်းနှင့်အတူပြိုင်ပွဲအချိန်ဇယား၊လက်ရှိပရိုမိုးရှင်းနှင့်အဖဲခန်းသစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်။ ကတည်းကပိတ္ဆို၏ပိုင်နက်အပေါ်ကရုရွား၊ရုကစားသမားလိုအပ်ပါတယ်သုံးစွဲဖို့တစ် ကိုဝင်ရောက်ဖို့။ မကစားအပေါ်တိုက်ရိုက်အဖဲချပ်။ ရုရှားကစားသမားမှတ်ပုံတင်နိုင်လွတ်လပ်လပ်နေစဉ်၊မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုမထားပေ။ နယူးအသုံးပြုသူများထံမှယူကရိန်းနှင့်ရုစ္စဲခဲ့ကြပြီးကတည်းက ၂၀၁၆။ မှတ်ပုံတင်ရန်ဒီအခန်းအတွက်၊သင်လိုအပ်များကိုအောက်ပါအချက်အလက်:မှတ်ပုံတင်ရေးပြီးနောက်၊အသုံးပြုသူအားလက်ခံတွေ့ဆုံအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်အတူဆုကြေးငွေသူတို့ကိုမှရရှိနိုင်၊သူတို့ကအသုံးပွုနိုငျသောအခါသိုက်ရန်ပုံငွေနှင့်ထပ်မံကစားပါတယ္။ နိုင်မှထုတ်ယူအနိုင်ရခံ၊ကစားသမားသွားရပါည့္စနစ္ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ဓာတ်ပုံပျံ့နှံ့၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်စာမျက်နှာနှင့်အတူနေအိမ်သို့ပါမစ်သို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်းအထောက်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊သမှအီးမေးလ်များ၏အခန်းရဲ့ထောက်ခံမှု။ အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေအသံုးျပဳသူမ်ားအတည်ပြုမကြာခဏကြာ ၇-၁၀ ရက်ပေါင်း။ မှာပထမဦးဆုံးဆုတ်ခွာ၏ရန်ပုံငွေအဖြစ်အလည္ေငွေအမြောက်အများ၊စစ်သားများကိုမေးမြန်းခံရဖို့ပိုကိုယ္တိုင္ရိုက္ပံုအတူလက်မှတ်။ ပေမယ့်နောက်ကွယ်မှာကျန်ရစ်င္ငံတကာဖဲအခန်းပေါင်းကဲ့သို့သောအ နှင့် ၈၈၈ ဖဲချပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသွားအလာ၊ဒါကြောင့်လည်းလူကြိုက်များနှင့်အတူကစားသမား:ညဦးယံ၌၊အရေအတွက်စုစုပေါင်း၏အသုံးပြုသူများ ဒါဟာရောက်ရှိ ၈-၉ ထောင်၊တစ်နေ့တာအတွင်းကြောင့်အလျော့ဖြင့် ၂။၅ ကြိမ်။ ကစားသမားတွေကနေအနောက်ဥရောပဆမ်၊ဖောက်သည်ထံမှရုရှားအတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုအအာရှကနေတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ။ ၏ဖွဲ့စည်းပုံများကိုကစားလယ်ပြင်သည်စံ:အအအအရင်ကဆိုရင်အနိမ့်ကန့်သတ်ပုံမှန်မှာအလတ်စားနှင့်အမြင့်မားတဲ့ကန့်သတ်။ တက်ကြွစွာဂိမ်းနှင့်အတူကစားကန့်သတ်အထိ ၅ ၁၀ ယူရို၊မရွိကစားသမားတွေအပေါ်ကျောက်ပြားကိုအတူအလောင်းအရွယ်အစား။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မှပညာရှင်ရောက်လာ၊တစ်ဦးကိုအထူးအပိုင်းငွေသား၏ဂိမ်းဖန်တီးခဲ့မှာ၊ဘယ်မှာမှသာအသစ်အသုံးပြုသူများကစားနိုင်ပါတယ်အမွတ္ ၉၀ လက်ထက်ကနေအခုအချိန်မှာ။ ရဲ့ဖဲချပ်ကိုအခန်းပေါင်းအမြဲသောအားဖြင့်အနိမ့်ထွန်နှုန်း၊နှင့်နာက္တစ္မ်ိဳးဖဲချပ်မရှိချွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်:ဒီမှာပျမ်းမျှထွန်က ၄ နှင့်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ကိုင် တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်သည်အဖြစ်အောက်ပါအတိုင်းလျှင်လက်ခဲ့မီပြီးစီးေျခညႇပ္ဖိထင်ရှားခဲ့သည်၊အမွတ္ထွန်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ အခါဝင်ပြိုင်ပွဲ၊ဖဲအခန်းကြာ ၁၀ ကိုသင်တန်းသားများ၏'-အတွက်။ အဆိုပါရာခိုင်နှုန်း၏ပြန်လာအတွက်လောင်းကစားရုံဂိမ်းများအတွက်အကွာအဝေး၏၉၅-၉၉ အနည္းဆုံး–အပေါ်အမေရိကန်ကစားတဲ့–အမြင့်ဆုံး၊အတွက်ရုရှားကစားတဲ့။ အင်္ဂလိပ်။ ပုံမှန်အတိုင်းငွေသားဂိမ်းအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ကိုင် နှင့်ကန့်သတ်ကိုင် နှင့်အတူပုံသေနှင့်အိုးေ၆ ၉ သင်တန်းသားများအဖြစ် နဲ့ ဟိုင်း-အလိုတူအလားတူကန့်သတ်ရွေးချယ်မှုများ။ ကျောက်ပြားနှင့်အတူအပါအလောင်းအရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်
နှင့် ၂၀ ၄၀ ပသည္။ မည်သို့ပင်အမျိုးအစားအဖဲချပ်ကစားခြင်းမှာနောက်ဆုံးနှစ်ကန့်သတ်အမြဲမဖြစ်နိုင်ပါ။ အဲကျောက်ပြားနှင့်အတူဂိမ်းအတွက်ဗြိတိန်ပေါင်၊ဒါပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူးအတွက်ဒေါ်လာ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တွင်၊အနည်းဆုံး ၁၀ ပြိုင်ပွဲစတင်တိုင်းမှာနာရီနာက္တစ္မ်ိဳးဖဲချပ်နှင့်အတူကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး၏ေရာင္းရန္-အပါအဝင်၊ နှင့်ဂြိုဟ်တု။ အကြံပြုပိဳင္ပြဲပံုစံမ်ား-အေးခဲ-ထွက်၊၊၊ပီ၊၊၊အမြန်၊ပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့်အခြားသူများ။ အားလုံးပြဲႏွနိုင်ပါတယ်ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ပုံစံစတင်ချိန်၊အဆင့်အတန်း၊ရာင္းရန္-အကွာအဝေးတွင်၊စားပွဲတင်အရွယ်အစား၊နှင့်အပိုဆောင်းထည့်ပါအာမခံ၊။ အများအပြားပြိုင်ပွဲများကိုဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်နှောင်းပိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုများအတွက်အချို့သောအချိန် ပြီးနောက်သူတို့စတင်။ အနိမ့်ဆုံးင္ခြအခကြေးငွေအဘို့ဤပြိုင်ပွဲသည် ၀။၂၀ ယူရို၊နှင့်အမြင့်ဆုံးပမာဏ ၁၀၀ ပသည္။ လူပ်ိဳ-စားပွဲပြိုင်ပွဲအတွက် ၂-၁၀ ကစားသမားတွေ၊နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသည့်အောက်ပါပုံစံများ:ထီ၊၊ပီ၊၊၊အားလုံးသို့မဟုတ်ဘာမှမ၊အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်။ ေရာင္းရန္-အကွာအဝေးကနေ ၀။၁၀ ရန် ၅၀ ယူရို၊ဒါပေမယ့်အထက်န့်သတ်အများဆုံးပြိုင်ပွဲက ၁၀ ပသည္။ ၎င်းဘာသာပြန်များကိုအဓိကပြိုင်ပွဲများ၊အများကြီးရှိပါတယ်ဂိမ်းအတွက်ဒေါ်လာ။ အပိုင်းအများပြိုင်ပွဲနှင့်အတူခေါက်ထွက်ဆုလာဘ်၊အရာများကိုတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပိုပြီးပြန်လည်။ အနီးစပ်ဆုံး-အကွာအဝေးတွင်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဒီအချက်ကနေ ၀။၂၀၁၀၀ ပသည္။ ပုံစံကိုဂိမ်း၏လှည့်ဖျား သွားကြ၏ပါဝင်အသုံးကစားသမားတစ်ဦးကိုကျပန်းဆုံးဖြတ်ချက်၏အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်။ ပေမယ့်အများဆုံးမကြာခဏဆုကအရာင္းရန္-နှစ်သင်တန်းသားများ၊အရံကစားသမားအခွင့်အလမ်းရဖို့အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်ထီပေါက်အကြောင်းထက်ကျော်လွန်အင္ခြပမာဏအားဖြင့်အဆတစ်ထောင်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အများအတွက်ဝယ်-၁၀၀ ယူရို၊အမြင့်ဆုံးအနိုင်ရသည် ၁၀၀၊၀၀၀ ပသည္။ ရေပန်းစားတဲ့အပြောင်းအလဲအဘယ်မှာရှိတိုကၤန္အသုံးပြုသည် ကဒ်မပါဘဲ ၂၊၃၊၄ နှင့် ၅၊အရာဂိမ်းအပင်ပိုပြီးခန့်မှန်းရခက်နှင့်အန္တရာယ်များ။ ဒါဟာရရှိနိုင်အဖြစ်ငွေသားနှင့်အတူကန့်သတ် နှင့် ၀။၅၀ ၁။ တစ်ခုအရှိန်ငြဂိမ္းတြင္ကစားသမားချက်ချင်းရွှေ့မှအခြားစားပွဲတွေကိုနှိပ်ပြီးနောက်"ခေါက်"ခလုတ်ကိုနှင့်အသစ်ကတ်များကိုလက်ခံရရှိ။ ရေကန်၏ကစားသမားတစ်ခုတည်းန့်သတ်ဖြစ်နေဆဲ။ သင်အလိုက်စဥ်ပွင့်လင်းဇယားအရေအတွက်၏များမှာ၊သူတို့ပျမ်းမျှခြင်း၊အိုး၏အရေအတွက်ကိုလက်ခတ်နှုန်းတစ်နာရီ။ နိမ့်ဆုံးကန့်သတ်အတွက်ဒီအည့္ခသည် ၀။၀၅ ၀။၁၀ ယူရို၊နှင့်အမြင့်ဆုံးကန့်သတ်ဖြစ်ပါသည် ၁-၂နှင့်အတူကျောက်ပြားနည်းကနေ ၀။၂၅ ၀။၅၀ ယူရိုမကြာခဏအချည်းနှီးတည်ရှိနေ။ ကစားသမားတွေအယူအစိတ်အပိုင်းအတွက်အွန်လိုင်းနဲ့အော့ဖ်လိုင်းပြိုင်ပွဲကြီးကစီစဉ်အ ကွန်ယက်နှင့်လည်းအနိုင်ရတဲ့လက်မှတ်အ စီးရီးမှာနဲ့အဖွင့်အမှာဖဲချပ်ခန်းဂြိုဟ်တု။ အများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ရပ်များမှာနာက္တစ္မ်ိဳးဖဲလစဥ္လူ့အဖွဲ့အစည်းအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲနှင့်အတူ$၁၀၊၀၀၀ အာမခံချက်။ မှရရန်၊သင်အောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးသိုက်စုဆောင်း၊၇၅၀ နာက္တစ္မ်ိဳးရမှတ်၊နှင့်အလောင်းထက်မပို ထက်လျော့နည်း$၁၊၀၀၀ လောင်းကစားရုံအတွက်ဒါမှမဟုတ်အတွက်အနိုင်ရသောဂြိုဟ်တုများ၏ဤပြိုင်ပွဲ။ နအချိန်ဇယား၏တိုက်ရိုက်စီးရီးနှင့်ဗိုလ်မှူးပြိုင်ပွဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ဧည့်အပေါ်အဖဲခန်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ အဖြစ် ၊ကစားသမားအားလက်ခံတွေ့ဆုံနာက္တစ္မ်ိဳးအတွက်အမှတ် ေငြဂိမ်းများနှင့်အပေါငျးတို့သအခန်းကော်မရှင်အတွက်ပြိုင်ပွဲ။ ၁၀၀ ရမှတ်အလှန်ဖလှယ်နိုင်ပြီးအဘို့အ$၁ ငွေသားသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲလက်မှတ်စတိုးဆိုင်အတွက်။ နာက္တစ္မ်ိဳးမှတ်စားပွဲအတွက်ငွေသားဂိမ်းများအခါဝင်ရောက်ပြိုင်ပွဲ၊သင်အမြဲရ ၁၇ ရမှတ်များအတွက်$၁:အခြားသောစကားအတွက်၊အဆိုပါကစားသမားရရှိတဲ့ ၂၀ ပြန်အမ်းငွေပေါ်တိုင်းလႊတ္ေတာ္ထွန်ထုတ်လုပ်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်မြှင့်တင်ရေး၊အသုံးပြုသူဝင်ရပါမည်အထူးနှုန်းများတဲ့ကုဒ်အတွက်"နည်းလမ်းများကို။ထွက်ခွာသည်"အပိုင်း။ အခန်းအသုံးပြုမှုထံမှဆော့ဖ်ဝဲကိုလူသိများပံ့ပိုးပေးလွမ်း။ အကို၎င်း၏စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမအပေါ်အခြေခံသည်အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအပြန်အလှန်နှင့်အတူအပေါငျးတို့သအခန်းနှင့်လက်ျာကိုရှေးခယျြစားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းအဘို့အ။ အဓိကအစာမျက်နှာမှအလိုင်း၊သင်ချက်ချင်းသွားဖို့အလိုရှိသောအပိုင်းများ၏လှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်အဘို့ဆင်းထိုင်လူကြိုက်များတယောက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိတွင်စတင် အချိန်။ အဆိုပါရှာဖွေမှုဆက်တင်များအတွက်ငွေသားဂိမ်းများနှင့်ပြိုင်ပွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ္အားဖြင့်ငွေကြေး၊ရာင္းရန္-အကွာအဝေး၊ပုံစံရေကစားသမား၊နှင့်ဖွင့်အချိန်။ အင်္ဂါရပ်ရရှိနိုင်ဂိမ်းအတွင်းပါဝင်သည်:၄-အရောင်ကၤန္၊ပြောင်းလဲနေတဲ့ကဒ်ကြက္၊ပြောင်းလဲနေတဲ့အဆိုပါပြဲကိုအဓိက၊အော်တို-ဝယ်ယူချစ်ပ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်များတဦးအပေါ်ကျောက်ပြားကို။ အကြောင်း-ဒိုးည့္ခမရှိဘဲအကျင့်ကိုကျင့်ခဲအားလုံးထုတ်ကုန်များပေါ်မှာ။ ပြိုင်ပွဲအတွက်ဧည့်ခန်း၊သင်ထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်လိုအပ်သောအချက်အလက်အကြောင်းအပါအဝင်ဖြန့်ဖြူးပေးချေမှုများ၊ဖွဲ့စည်းပုံများ၏ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်စနစ်နှင့်ထိုရာထူး၏။ ဖဲခန္းမတားမြစ်အသုံးပြုခြင်း၏တတိယပါတီဆော့ဖ်ဝဲအဘို့အဖြာကစားသမား။ သင်သည်လည်းအရေးပုံ၏ပြိုင်ဖက်။ သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်မိုဘိုင်းအက်ပ်အခမဲ့ကနေအခမဲ့အဘို့အတရားဝင်ဆိုက်၏အခန်း။ ၾကားကျောက်ပြားနှင့်ရွေးပြိုင်ပွဲသည်အပင်မြန်မြန်၊နှင့်အတူတူစစ္မနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ရာင္းရန္-ေဂိမ္း၊ငွေကြေး၊အချိန်၊နှင့်အဆင့်အတန်းဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်လေ။ ထိုအက္ပ္ကိုအကျင့်ကိုကျင့်မရှိဘဲအေး တောင်ပေါ်အသက်ကြီးဖုန်းအပြေးဤ။ နာက္တစ္မ်ိဳးဖဲချပ်သည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အကြီးဆုံး ကွန်ယက်များစုစည်းမှုသည်ဥရောပနှင့်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရိုးရိုးသားသားနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖဲချပ်။ အဆိုပါရလဒ်များအလက်နှင့်လောင်းကစားရုံဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ကျပန်းနှင့်မညှိမည်သည့်လမ်းအတွက်ပလက်ဖောင်း။ လျှို့ဝှက်အသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်များဖြင့်ကာကွယ်ပြားဒေတာတွေကိုစာဝှက်စနစ်။ ဖဲခန္းမတားဆီးကစားသမားတွေကနေထုတ်ပေးဆောင်နိုင်၊မည်သည့်အရွယ်အစား၊သူတို့အလွန်ရိုးသားလမ်း–ခြင်းမရှိဘဲကြိုတင် ကြားသူများ၊အလွဲသုံးစားမှု၏ဆုကြေးငွေနှင့်ကစားခြင်းမှအခြားလူများရဲ့ဂိမ်းကစားအကောင့်အသစ်များ၏။ နာက္တစ္မ်ိဳးဖဲချပ်တစ်ဥပဒေကြောင်းအရအဖဲချပ်ဂိမ်းလည်ပတ်သောလိုင်စင်အောက်မှအ ဂိမ္းကော်မရှင်ကနေဒါ။ တရားဝင်လိုင်စင်နှင့်ပြည်နယ်အ-အ-အ-အနုပညာဆော့ဖ်ဝဲကိုအာမခံတရားမျှတပြီးပွင့်လင်းကစားဒီဖဲချပ်။ မည်သည့်အငြင်းပွားမှုများကြားကအခန်းနှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များနိုင်ပြေဥပဒေများနှင့်အညီများဒီပြည်နယ်။ အနည်းငယ်မျှသာကုန်ကျစရိတ် အသိုက်နှင့်ဆုတ်ခွာငွေကြေးပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၂၀ ယူရို ဗြိတိန်ပေါင်။ ရုရှားအားကစားသမားတွေထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ရန်ပုံငွေသူတို့ရဲ့ဂိမ်းအကောင့်အသုံးပြုဤရွေ့ကားနည်းလမ်းများ:ငြထုတ္လိုအလားတူလမ်းအတွက်၊ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြာ၊ဒီအပေါ်မှာအချိုး ၁-၃ ရက်ပေါင်း။ ပထမဦးဆုံးအဘို့အရပ်နားခြင်းနှင့်ရပ်နားခြင်း၏ကြီးမားသောပမာဏ၊အပြောင်းအလဲများလျှောက်လွှာ၏အကြာကြာယူစေခြင်းငှါကြောင့်အပိုဆောင်း၏အတည်ပြုကစားသမား၏။ နာက္တစ္မ်ိဳးဖဲချပ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖဲအခန်းနှင့်အတူကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး၏ဖြစ်ရပ်များ၊သင့်လျော်သည်နှစ်ဦးစလုံးအရင်ကဆိုရင်နှင့်ပုံမှန်။ အရေးပါသောအားသာချက်အတွက်အဟောင်းအမည်ကိုအများကြီးကြိုဆိုဆုကြေးငွေနှင့် ၊ပြီးနောက်အဘို့အ–အမြတ်အစွန်း ။ အသီးအသီးကစားသမားအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်အရတဦး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်များကြောင့်၊သူတို့ဂြိုဟ်တုကျင်းပကြသည်မှာအွန်လိုင်း။ ၏အရည်အသွေးဆော့ဖ်ဝဲ၊၏လုံခြုံရေးအဆိုပါဂိမ်းနှင့်များ၏ပြဿနာအပေးဆောင်ထွက်အနိုင်ရကြပါဘူးဖြစ်စေမည်သည့်သံသယ။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်း၏ဤအဖဲခန်းဖြစ်ပါတယ်ရှိကွောငျးကိုအဘယ်သူမျှမလုနီးပါးကန့်သတ်ဂိမ်းကျော် ၅ ၁၀ ယူရို၊ဒါကြောင့်မြင့်မားကြိတ်အဘို့အရှာဖွေသင့်ပါတယ်အခြားနေရာဖဲချပ်ကစားရန်။ မရှိပိုဖဲအခန်းပေါင်းယခု အဲလုံလောက်တဲ့ထက်ပို၊ဒါပေမယ့်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံစားနာက္တစ္မ်ိဳးဖဲချပ်တွေအများကြီး။ သာမန်ယောက်ျားတွေရအသီးကဲ့သို့မိမိတို့ထောက်ပံ့မှုအတွက်အလုပ်လုပ်။ ငါပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်မေးများအတွက်ရှင်းလင်းသောနောက်၊ကျွန်တော်ချက်ချင်းခေါ်နှင့်ပန်။ ။ ငါလိုသည်ငါ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြဖို့ဒီအခန်း။ လျှင်ကြောင့်သူ့အဘို့မဟုတ်ခဲ့၊ငါအရွင္ျပျင်း၏။ ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးမယ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖဲချပ်ကစားရန်။.
Poker Stars Sochi-shkarko Klienti për PC dhe
အပိုဆု အစီအစဉ် ချစ်ပ် သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမှ ပြရန် ကွန်ပျူတာသည် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ ဇြန္လဲ့ေ ဟက်ကာ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်
© 2021 ဖဲသဲလွန်စအြန္လိုင္း